Liiska Qalabka Idaacadda FM oo Dhameystiran (sawiro leh)
Waxaa qoray Ray Chan / Abriil 20, 2021 / Wararka FM-ka
"Qolka Rack Station ee Raadiyaha ama Qolka Injineerinka (sidoo kale loo yaqaan Qolka Qalabka Central) had iyo jeer waa qaybta ugu muhiimsan ee nidaamka raadiyaha oo dhan, qalab badan oo warbaahineed oo waaweyn. waxaa la dhigayaa qolka rashka Haddii aad rabto in aad dhisto idaacad cusub oo aadan aqoon sida loo doorto qalabka muhiimka ah ee raadiyaha, markaa liiska qalabkan ee qolka rackka ee raadiyaha caadiga ah ayaa kara. si fiican kuu caawiya --FMUSER"
Haddii aad ka heshay, la wadaag!
Liiska waxaa loo qaybin doonaa dhawr qaybood, kuwaas oo u dhigma noocyada kala duwan ee qalabka loo isticmaalo qolka qalabka rafka ee idaacada caadiga ah. Bal aan eegno.
Maxaan ka heli karaa Wadaaggan Bilaashka ah?
Qaybta Habaynta Calaamadaha Maqalka
Qaybaha Gudbinta Maqalka
Qaybta Kontoroolka Korantada
Qaybta Isku xirka Cable
Qaybta Taakulaynta Agabka
Qaybta Taageerada kaabta
Raadi Khabiir u Raadi Xaruntaada
→Qaybta xigta waa Qaybaha Gudbinta Maqalka | Ku laabo
Qaybta habaynta calaamadaha maqalka, 9 qalab ayaa ku jira, waana (guji si aad u booqato):
Baahinta Satelite-ka qaataha
Beddelka Maqalka Stereo
Baahinta Maqalka Maqalka
Rack AC Conditioner
La soco Sameecado-dhegaha
Digniin Cilad Maqal ah
Tayada dhawaaqa baahinta ee heer sare ah ayaa had iyo jeer ah yoolka koowaad ee ay raacaan dadka xiiseeya raadiyaha, kaas oo sidoo kale ah yoolka ugu horreeya ee ay raacaan hawl-wadeenno badan oo idaacadeed. Xaqiiqdii, haddii aad rabto inaad raacdo tayada codka saxda ah, qaar ka mid ah qalabka muhiimka ah ayaa lagama maarmaan ah, sida processor-ka maqalka ah ee waxqabadka sarreeya ee FMUSER wuxuu kaa caawin karaa inaad si wax ku ool ah uga fogaato saameynta buuqa badan (in kasta oo qiimuhu aad qaali u noqon doono), laakiin waa mid ka mid ah xalalka waxtarka leh. Dabcan, sida Ray uu leeyahay: "hal duni ma samayn karto xadhig, geed keliyana kama dhigi karo kayn". Waa maxay qalabka kale ee baahinta/qalabka aad u baahan tahay in aad ku darto marka laga reebo Processor-ga Maqalka oo qiimo jaban leh? Aan aragno waxa Fmuser haysto!
1. Baahinta Satelite-ka qaataha
Sidee ayuu Baahinta Satelite-ka qaataha shaqeeyaan?
Aqbalaha dayax-gacmeedka waxaa loo isticmaalaa in lagu helo barnaamijka maqalka dayax-gacmeedka oo lagu galo gudaha Gudbinta FM-ka. Isha ishaarada ee qolka rack-ku waxay u dhigantaa isha uu ka keenay barnaamijka uu dayax-gacmeedku baahiyo. Satellite TV waa nooc ka mid ah barnaamijka TV-ga. Waxay u gudbin kartaa signalka bilaa-waayirka ah TV-ga caalamiga ah iyada oo loo marayo shabakada isgaarsiinta dayax-gacmeedka, signal raadiyaha, dibadda FMUSER Anteenada FM, iyo xarunta baahinta. Isha barnaamijku waxay u dirtaa calaamada Xarunta Warbaahineed ee bixiyaha adeegga. Qaadaha TV-ga dayax-gacmeedka ayaa ah qalabka lagu helo lagana furfuro barnaamijyadan.
Waxaa jira afar nooc oo caadi ah oo qaata satalaytka
Qaade dhijitaal ah oo leh duubiyaal
qaataha kanaalka qarsoon
Talooyin ka yimid Ray - Satellite TV waxa uu isticmaalaa anteeno gaar ah, oo inta badan loo yaqaan a anteenada dayax-gacmeedka.
maxaad Baahinta Satelite-ka qaataha waa muhiim?
Intooda badan waxaa loo isticmaalaa in lagu gudbiyo barnaamijyada dayax-gacmeedka ee bilaashka ah sababtoo ah aad bay qaali u tahay in la kiraysto satalaytka si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda, sida FmuserRay ay baarto, qaabka utility wuxuu la xiriiraa cod-weyneeye soo noqnoqda maqalka. circuit, Aqoonsiga hal weji iyo wareegga demodulation, wareegga kontoroolka cod-weyneeye inta jeer ee maqalka, iyo aqoonsiga wejiyada badan iyo wareegga demodulation. Ka dib markii la dhimay signalka habaynta maqalka iyo maamulka code modulation signal fmuser.-net input by cable baahinta isha isha isha fmuser.-net, hal kanaal soo saartaa code maamulka, hal channel soo saartaa code gacanta iyada oo loo marayo microprocessor, kan kalena soo saartaa maqal ah. signalka, iyo koodhka kantaroolka wax soo saarka ayaa xakameynaya xulashada calaamadda maqalka. Xaqiiji xakamaynta shaqaynaysa iyo maaraynta aqbalaha, si baahinta maqalka fiilada ay u gaadho adeeg tayo sare leh, kanaal badan, adeegyo kala duwan leh.
Talooyin ka yimid Ray - Qaadaha maqalka dayax-gacmeedka waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu qaybiyo barnaamijyada maqalka iyada oo loo marayo dayax-gacmeedka a shabakadda raadiyaha, taas oo ah qaybta ugu muhiimsan ee codsiga qaybinta raadiyaha
Xagee laga iibsadaa Baahinta Satelite-ka qaataha?
< Qaybta Habaynta Calaamadaha Maqalka
2. Beddelka Maqalka Stereo
Sidee ayuu Beddelka Maqalka Stereo shaqeeyaan?
Furaha maqalka waxa loo isticmaalaa in lagu ogaado heerka maqalka ee kanaal kasta si wareeg ah. Markaad bedesho, ma jiro kanaal maqal ah oo si toos ah u boodaya fmuser.-net iyo wakhtiga daahitaanka beddelka waa ikhtiyaari. Isticmaalayaashu waxay dejin karaan dhererka kala duwan ee beddelka waqtiga daahitaanka ee guddiga hore si waafaqsan baahidooda, taas oo bixisa dammaanad wax ku ool ah baahinta badbaadada ee maqalka. Furaha maqalku wuxuu u gudbin karaa calaamadda gelinta maqalka ee kanaalka badan ee dekedda wax soo saarka. Marka laga hadlayo calaamada wax-soo-gelinta ee kanaalka badan, waxay u beddeli kartaa calaamad kasta oo wax-soo-gelinta ah ee dekedda wax-soo-saarka.
Talooyin ka soo jeeda fmuser-ray - Caadiyan, furaha maqalku wuxuu dhammaystiri karaa beddelaad kasta oo ah 1 ~ 16 gelinta iyo 1 ~ 16 soo saarista. Waxay leedahay a shaqada kontoroolka fogaanta infrared iyo RS232 shaqada kontoroolka isgaarsiineed ee terminal. Waxay hore ugu dari kartaa is-dhexgalka baska RS485, isticmaalayaashuna waxay si fudud u dhamaystiri karaan beddelka calaamada habka bandhigga.
maxaad Beddelka Maqalka Stereo waa muhiim?
Furaha maqalka ayaa u gudbin kara calaamado gelinta maqalka ah oo badan dekedda wax soo saarka. Marka laga hadlayo calaamadaha wax-soo-gelinta ee badan, calaamad kasta oo wax gelin ah ayaa loo wareejin karaa dekedda wax-soo-saarka. Furayaashan maqalka ah ee analooga ah iyo kuwa dhijitaalka ah (qaar leh muuqaal) ayaa kuu oggolaanaya inaad ku xidhid gelinta bidixda iyo midigta analoogga iyo/ama agabka maqalka dhijitaalka ah hal ama ka badan oo wax soo saar ah. Talooyin ka yimi isticmaalayaasha FM- Marka gelinta ay xaddidan tahay, waxay oggolaadaan beddelka fudud halkii ay ka jari lahaayeen oo dib isugu xidhi lahaayeen fiilada. Marka loo eego baahiyaha warshado kala duwan, furaha maqalku kaliya ma haysto isku-xidhka RCA ee taageeraya calaamad maqal oo aan dheeli tirnayn laakiin sidoo kale waxa uu leeyahay isku-dheellitirnaan maqal ah oo XLR ah. www.fmuser.-net Dareeraha maqalku waa qalab beddelka shaxanka wax qabadka sare leh oo si gaar ah loogu talagalay soo bandhigida calaamadaha maqalka ee fmuser.-net. Dareeraha maqalka ee stereo waxaa si weyn loogu isticmaalaa injineernimada codka, waxbaridda maqalka-muuqaalka, taliska, iyo xarunta xakamaynta, qolka shirarka warbaahinta badan, iyo munaasabadaha kale si loo dhamaystiro beddelka calaamadaha maqalka.
Xagee laga iibsadaa Beddelka Maqalka Stereo?
3. Baahinta Audio Processor
Sidee ayuu Baahinta Maqalka Maqalka shaqeeyaan?
The processor maqal ah wuxuu farsamayn karaa signalka maqalka ah ee laga helo satalaytka qaataha. Baahinta soosaarayaasha maqalka ah ka kooban kombaresarada/xaddiyada-band-yada badan ee khaaska ah. Processor-ka maqalka ayaa noqon doona qalabkii ugu dambeeyay ee la isticmaalo ka hor inta aan calaamadaha maqalka la gudbin. Processor-yare maqalka ah, oo sidoo kale loo yaqaan processor-ka dhijitaalka ah, waa nooc ka mid ah aaladaha lagu gaadho saamaynta habbaynta signallada dhijitaalka ah ee maqalka hawl-badan leh. Sida FMuserray tixgelin in: Inta badan waxaan isticmaalnaa qalabka wax lagu socodsiiyo marka aan isticmaaleyno qalabyo badan oo elegtaroonig ah. www-fmuser-net Waxay naga caawin kartaa inaan xakameyno muusikada ama aan dhalino muusikada, waxay naga dhigi kartaa inay soo saarto saameyno kala duwan oo muuqaal ah, kordhiso shoogga muusigga ama waxay dhalisaa muusigga, isla markaana, waxay hagaajinaysaa tayada muusigga oo ku filan in la xakameeyo wax badan hawlaha maqalka ee goobta. Qaab dhismeedka gudaha ee processor-ka maqalku waxa uu guud ahaan ka kooban yahay qaybo wax gelin ah iyo qaybo wax soo saar ah. Shaqadeeda gudaha ayaa ah mid aad u dhameystiran, qaar ka mid ah jiidista iyo daadinta modules-ka barnaamijka, kuwaas oo ay u dhisi karaan isticmaalayaasha si xor ah, fmuser.-net.
Guud ahaan, naqshadda gudaha ee processor-ka dhijitaalka ah wuxuu guud ahaan ka kooban yahay qayb wax gelin ah iyo qayb wax soo saar leh. Hawlaha qaybta farsamaynta maqalku guud ahaan waa sida soo socota: qaybta wax gelinta guud ahaan waxaa ka mid ah xakamaynta faa'iidada wax gelinta (faa'iidada wax-soo-gelinta), sinnaanta wax-gelinta (dhowr qaybood oo ka mid ah sinnaanta halbeegga), gelinta EQ, iyo wixii la mid ah, Dib-u-dhigista soo-gelinta, soo-galinta polarity, iwm. fmuser.-net. Qaybta wax-soo-saarka guud ahaan waxay leedahay dhowr hawlood oo caadi ah, sida qaybinta calaamadaynta, habaynta (wareega), shaandhada sare ee gudbinta (HPF), shaandhada hoose ee hooseeya (LPF), barbareeyaha (wax soo saarka EQ), daahsoon, faa'iido, dib u dhac, heerka bilawga xaddidaya xad).
Processor-yaasha maqalka ee caadiga ah waxa loo qaybin karaa 4 nooc:
Processor ku hadla fudud
Waxa loo isticmaalaa in lagu xidho qasiyaha iyo cod-weyneeye korantada halkii laga isticmaali lahaa qalabyada durugsan ee analooga ah ee habaynta calaamadaha.
Processor-sare maqal dhijitaal ah oo ka kooban 8-in 8-out ah
Waxay bedeli kartaa nidaamka analoogga ah ee ka kooban isku-darka yar iyo qalabka durugsan ee nidaamka shirka. Waxay leedahay shabakad iskuxiran waxaana lagu xidhi karaa kombuyuutarka iyada oo loo marayo Ethernet barnaamijka iyo xakamaynta wakhtiga dhabta ah ee internetka.
Processor maqalka dhijitaalka ah oo leh shaqaynta gudbinta maqalka ee shabakadda
Waxay la mid tahay labada shaqo ee kor ku xusan, laakiin shaqada gudbinta maqalka ee shabakada ayaa lagu daraa (CobraNet guud ahaan waa la taageeraa), taas oo u gudbin karta xogta codka midba midka kale LAN.
Matrix ka shaqaynta
Processor-ka noocaan ah waa martigeliyaha aad u awood badan, kaas oo inta badan lagu isticmaalo nidaamyada baahinta waaweyn ama xarumaha shirarka. Matrijyada wax lagu farsameeyo ee waaweyn ayaa dhexda u ah qolka kombayutarka, koontaroolka habaynta ee dhammaan qolalkana waxaa dhamaystiraya mishiinka ku jira qolka kombayutarka. Sidaa darteed, fmuser.-net, iyada oo aan loo eegin hal ama in ka badan oo qolal la isticmaalo, processor-ka ku jira qolka weyn ee kombiyuutarka waa in la shideeyaa fmuser.-net wakhti kasta. Shabakadda maqalka ee noocaan ah waxay ku saleysan tahay CobraNet ama borotokoolka kale ee Gigabit Ethernet waxayna taageertaa gudbinta iyo xakameynta waqtiga-dhabta ah.
maxaad Baahinta Maqalka Maqalka waa muhiim?
Heerka ugu fudud, DSP waxaa loo qaddarin karaa inay tahay mid aad u qurux badan oo aad u saxsan xakamaynta codka. Marka la isku daro processor laga bilaabo fmuser oo leh shaqada cabbirka ee falanqeeyaha-waqtiga-dhabta ah, dheellitirka codka iyo saxnaanta nidaamka maqalka waxaa si weyn u wanaajin kara farsamoyaqaanno si habboon u tababaran. Halkii laga dhageysan lahaa cajaladaha, codka bini'aadamka iyo qalabka muusikadu waxay aad ugu dhawaqayaan inay goobta ku soo bandhigaan. Farsamayaqaannada khabiirka ah waxay isticmaali karaan isleeg isteeriyo si ay u horumariyaan habaynta iyo sawirka habka codkaaga, taas oo gacan ka geysan karta in la sii wanaajiyo runnimada waayo-aragnimada dhegeysiga.
FM Farsamada farsamaynta maqalku waxay ku salaysan tahay fikradda ah inay xaqiijin karto faa'iidadan iyada oo ka dhigaysa dhagaystayaashu wax kasta oo isbeddel ah. Habaynta maqalka ee guusha leh waxay qabataa wax ka beddelka korantada ee loo baahan yahay iyada oo soo bandhigaysa natiijo dabiici ah oo macquul ah.
U Tusaale ahaan, hoos u dhigista kala duwanaanshaha firfircoon ee ay keento farsamaynta ayaa ka dhigaysa dhegeysiga jawiga buuqa badan (gaar ahaan baabuurta) aad uga sii adag. Muusigga leh dhaqdhaqaaq firfircoon oo ballaadhan, muusiga jilicsan ayaa inta badan si buuxda u baaba'a saamaynta dhawaaqa asalka ah. In yar oo dhegaystayaal ah ayaa ku dhegaysata muusiga jawi deggan oo dhammaystiran. Haddii aad kor u qaaddo codka, kanaalada waaweyn waxay noqon karaan kuwo aan raaxo lahayn hadhow. Baabuurta, kala duwanaanshaha firfircooni kama dhaafi karo 20 dB iyadoon dhibaatooyinkan keenin. Habaynta maqalka ee kartida leh waxay yarayn kartaa kala duwanaanta firfircoon ee barnaamijka iyada oo aan waxyeello xun.
S Intaa waxa dheer, agabka barnaamijka baahinta ayaa inta badan ka imanaya ilo kala duwan oo si degdeg ah isu beddelaya, kuwaas oo intooda badan la sameeyo iyada oo aan la tixgelinayn dheelitirnaanta kale ee spectrum. Haddii xadka band-yada badan loo isticmaalo si sax ah, faragelinta u dhaxaysa ilaha waxay si toos ah u noqon kartaa mid joogto ah. FM-user-Ray wuu ogyahay in ilaa inta filimada la sameeyo si loo ilaaliyo muuqaal joogto ah, xayiraadaha band-yada badan iyo joogteynta ayaa lama huraan u ah idaacadaha doonaya inay horumariyaan saxeexyo maqal oo gaar ah iyo shakhsiyad wanaagsan oo xooggan. Dhammaadka maalinta, dhammaan waxay ku xiran tahay waayo-aragnimada daawadayaasha.
E Intaa waxaa dheer, dalalka intooda badan waxay leeyihiin dulqaad yar oo ku saabsan habaynta, sidaas darteed xadka ugu sarreeya waa in lagu dabaqaa calaamadaha loo diro mowjadaha dadweynaha ee nidaamsan.
Waxqabadka processor-ku waa in lagu qiimeeyaa noocyo badan oo kala duwan oo xogta barnaamijka ah oo loo isticmaalo qaab qaabaysan, ugu dambayntiina, processor-ku waa in lagu qiimeeyaa awoodda uu u leeyahay inuu soo jiito oo uu ilaaliyo bartilmaameedka wariyeyaasha la siiyay. Dhegeysi waqti dheer ah lama beddeli karo, ayuu yidhi Ray.
Marka la soo koobo, faa'iidooyinka isticmaalka soo-saareyaasha maqalka dhijitaalka ah waa:
Ka saarida sinaanta ee Maqalka
Waxay ka saari kartaa dheelitirka lagu daray muusikadaada. Shirkadaha baabuurta sameeya waa in ay hal dinaar ku qarash gareeyaan samaynta baabuurta, ayuu yidhi Ray, si aanay u isticmaalin kuhadlo tayo sare leh, waxa ay adeegsadaan ku hadaaqayaal jaban oo ay ku daraan bareeg si ay ugu dhawaaqaan si fiican. Tani waxay miisaamaysaa "midabaynta codka" markaad ku darto cod-bixiyeyaal la cusboonaysiiyay, taasoo yaraynaysa codka aad maqashid.
Soo koobida Maqalkaaga
Nidaamyo maqal oo badan oo warshadeed oo horumarsan ayaa calaamadaha muusiga u qaybiya cabbiro kala duwan oo ku hadla. Sababtoo ah waxaad dooneysaa in kuwa ku hadla cusubi ay ku shaqeeyaan waxqabadka ugu fiican, processor-ku wuxuu isku geeyaa calaamadaha hal kanaal oo buuxa. Hadda, rakibahaagu wuxuu dooran karaa inta jeer ee muusiga ku habboon, ayuu yidhi Ray.
Kobcinta Waayo-aragnimada Dhageysiga
Daahida dhijitaalka ah ayaa lagu daray muusiggaaga. Weligaa ma dareentay in codkaagu u muuqdo mid laga sameeyay albaabka kuugu dhow? Processor-ku wuxuu noo ogolaanayaa inaan dib u dhigno imaatinka codka ee qof kasta oo hadlaya. Hadda, waxaas oo dhami waxay isla gaarayaan dhegahaaga. Tani waxay u oggolaan doontaa codkaaga inuu ka soo muuqdo hortaada, oo leh masraxa iyo saamaynta sawirka oo la barbar dhigi karo riwaayadaha jazz-ka ama bandhigyada acoustic fmuser.-net.
Horumarinta tayada codka iyo tayada wax soo saarka
Barbaraha sida taxadarka leh loo sameeyay waxa uu inoo suurta galinayaa in aan si gaar ah u hagaajino ku hadla kasta oo ku jira nidaamkaaga cusub si aan kor ugu qaadno tayada dhawaqiisa iyo wax soo saarkiisa. Marka la soo koobo, waxaan si fudud kuu sheegi karnaa in si taxadar leh loo qaabeeyey, si taxadar leh loo dhisay nidaamka baahinta iyo processor-ka si sax ah loo hagaajiyay uu keeni karo 100% ama ka sareeya hagaajinta tayada codka.
Xagee laga iibsadaa Baahinta Maqalka Maqalka?
4. Rack AC Conditioner
Sidee ayuu Rack AC Conditioner shaqeeyaan?
Qaboojiyaha korantada, oo sidoo kale loo yaqaano qaboojiyaha khadka, ayaa ka ilaalin kara qalabka qalliinka. Waxa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo culaysyada xasaasiga ah iyadoo meesha laga saarayo isbedbedelka korantada sida sarbeebyada, ku-meel-gaadhka, iyo qaylada korantada. Qaboojiyaha korantada wuxuu u shaqeeyaa sida baqdin u dhexeeya godka iyo nidaamka si loo baabi'iyo isbedbeddelka korantada iyo raadiyaha iyo faragelinta elektromagnetic fmuser.-net taas oo saameyn karta waxqabadka nidaamka, ayuu yidhi Ray. Qaboojiyaha tamarta waxaa inta badan loo isticmaalaa wax soo saarka warshadaha iyo shaybaarka, iyo sidoo kale aad ugu badan ee codsiyada elektarooniga ah guriga, sida qalabka maqalka. Qaboojiyayaashu waxay noqon karaan kuwo elektaroonik ah ama transformer-ku-salaysan, kaas oo gacan ka geysanaya in la saxo danab iyo mawjado qaab-maroojin ah oo meesha ka saaraya buuqa korantada ee dibadda (sida inta jeer iyo faragelinta korantada) ee ay sababaan qalabka raadiyaha iyo matoorka. Si ka duwan ilaalinta sare-u-qaadista, ilaaliyayaasha qallafsan waxay ka ilaalinayaan aaladaha korontadu, si kastaba ha ahaatee, sare u kaca iyo kor u kaca ayaa weli saameeya qaar ka mid ah qalabka elegtarooniga ah ee xasaasiga ah. Faragelinta soo noqnoqda raadiyaha (RFI), faragelinta korantada (EMI), iyo isbedbeddelka korantadu waxay sidoo kale saameyn karaan codka waxayna yareynayaan codka iyo tayada sawirka qalabka. Tusaale ahaan, marka muusikiiste uu maqlo dhawaaq guuxa leh oo ka imanaya cod-weyneeye gitaarkiisa oo kondeeyaha korantada isla markiiba ka saari karo, fmuser.-net waxa la sheegaa inay caddayn u tahay qaboojiyaha awoodda sixirka ah. Dhibaatada kaliya ayaa ah in buuqa badanaa uu keeno wareegga dhulka, iyo qaboojiyaha korantadu waxba kuma laha. Ilaaliyaha sare ayaa si wax ku ool ah uga hortagi kara waxyeelada xadhkaha korantada. Si kastaba ha ahaatee, kor u kaca iyo sare u kaca ma saamayn doonaan oo kaliya qaar ka mid ah qalabka elegtarooniga ah ee xasaasiga ah. Faragelinta soo noqnoqda raadiyaha (RFI), faragelinta korantada (EMI), iyo isbedbeddelka korantadu waxay sidoo kale saameyn karaan codka, madadaalada, iyo qalabka xafiiska, taas oo hoos u dhigeysa tayada codka iyo sawirka.
maxaad Rack AC Conditioner waa muhiim?
Qaboojiyaha AC wuxuu ilaalin karaa qalabka nidaamka maqalka iyo muuqaalka ee waxqabadka sarreeya wuxuuna leeyahay ilaa 10 ama in ka badan. Qaboojiyaha AC waa qaboojiyaha caadiga ah, kaas oo bixin kara koronto "nadiif" AC ah, ilaalinta qallafsan, iyo shaandhaynta sanqadha, kana fogaato waxyeelada qalabka ay keento hillaaca, qallafsanaanta, iyo dhibaatooyinka kale. Qaboojiyaha AC wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay codsiyada meesha aad u baahan tahay inaad isticmaasho sahay koronto oo buuq badan, sida codsiyada guriga iyo xafiiska. Unugyada qaarkood waxay leeyihiin AVR-ku-dhismay (maqal-qaade iyo muuqaal-qaade) si loo magdhabo isbeddelka korantada. Laakiin dhab ahaantii, UPS (koronto aan kala go' lahayn) waxay leedahay beddelaad iyo batari u gaar ah, kaas oo loo isticmaali karo in lagu magdhabo tamarta korantada hoose ama sare-sare, fmuser.-net iyo bixinta shaandhaynta awoodda iyo ilaalinta awoodda. Waxqabadkeedu wuu ka fiican yahay kan qaboojiyaha AC. Sida Ray leeyahay, marka shaandhaynta sahayda korantada aan la heli karin, UPS waa inay noqotaa doorashada koowaad ee server-ka iyo qalabka shabakada.
Faa'iidooyinka nidaaminta korantada waxaa ka mid ah:
Ilaalinta korantada ee kor u kaca iyada oo loo marayo silig, khadka taleefanka, gelinta TV-ga coaxial, iyo isku xirka LAN waxay u horseedi kartaa hoos u dhac ku yimaada waxqabadka nidaamka ama nidaamka cillad.
Dabar goynta qaylada
Idaacadaha iyo telefishinka, aaladaha mobilada, matoorada korontadu waxay sababaan buuqa fiilooyinka - xitaa qalabka hadda jira (vacuum, qaboojiyaha) ayaa soo saari kara buuq.
sixitaanka isbedbedelka danab iyo waveform qalloocan.
Noocyada iyo xaddidaadaha korantada:
Tani waa nooca ugu raqiisan ee qaboojiyaha korantada ee kala qaybiya qaybta buuqa badan ee soo noqnoqda - ku qotoma iyada oo loo marayo capacitor. Kuwani waxay bixiyaan shaqooyin yaraynta dhawaaqa aasaasiga ah.
Noocan ah qaboojiyaha korantada wuxuu leeyahay shaqo dhimis sanqadh ka wanaagsan oo ka fiican qaabka inductor-capacitor model (korka). Waxaa lagu gartaa koronto-dhaliyaha isku-dheellitirka go'doominta, kaas oo dheellitiri kara awoodda AC oo soo saari karta saameyn ku habboon dhimista dhawaaqa qaybaha maqalka iyo muuqaalka. Marka la barbardhigo filtarrada dadban, aad bay uga qaalisan yihiin, ka weyn yihiin, ka culus yihiin, iyo buuq badan yihiin, wax soo saarkooduna waa xaddidan yahay sababtoo ah saamaynta qoyaanka ah ee beddelka dheelitirka.
dib u soo kabashada AC
Qaboojiyaha dib u soo celinta AC wuxuu soo dayn doonaa kulayl badan marka uu socdo, laakiin qiimuhu wuu sarreeyaa, laakiin waxay si fiican u xallin kartaa dhibaatooyinka la xidhiidha qaylada maqalka iyo muuqaalka muuqaalka. Mabda'a shaqadeedu waxay la mid tahay tan koronto-dhaliye, kaas oo loo isticmaalo in lagu hagaajiyo korantada AC, summaynta waveform sax ah (qalloocin), oo yareeyaan ama baabi'iyaan dhawaaqa hab-hooseeya ee is-waafajinta ah (sabato ah culayska aan dheeli tirnayn ee khadka AC) Xataa ama qaylada xaddidan ee ay derisyadu ka keenaan gurigaaga), kuwani waa xudunta dhibaatooyinka la yaqaan. Nidaamiyeyaashan-dhamaadka sare waxay adeegsadaan wareegyada xasilinta korantada oo toos ah iyo beddelmiyayaal doorsoomayaal-lagu xakameeyo microprocessor si ay u bixiyaan koronto cusub oo AC gabi ahaanba nidaamkaaga madadaalada iyada oo aan buuq sawaxan keenin ama kor u kaca.
Xagee laga iibsadaa Rack AC Conditioner?
5. La soco Sameecado-dhegaha
Sidee ayuu La soco Madaxa Taleefoonka shaqeeyaan?
Korjoogteynta sameecadaha dhegaha-dhegaha, oo sidoo kale loo yaqaanno dhegaha-dhegaha istuudiyaha, ayaa inta badan loo isticmaalaa si loola socdo duubista, dib u soo saarida dhawaaqyada ku dhow duubista asalka ah, iyo soo qaadashada iyo kala soocidda noocyada qalabka muusiga ee fmuser.-net marka heerarka dhawaaqa loo baahan yahay in la hagaajiyo. Codsiga isku dhafka dhawaaqa, taleefoonnada gacanta ee kormeeraha ayaa muujinaya xoogga ugu yar ama horay u sii xoojinta soo noqnoqoshadooda gaarka ah, si dadka isticmaala ay si cad u maqlaan baska, dhexda, iyo seddexleyda iyada oo aan "isbeddel (kor u qaadis ama daciifin)", ayuu yidhi fmuser-Ray .
maxaad La soco Sameecado-dhegaha ayaa ah muhiim?
Qalabka dhegaha-dhegaha ayaa leh jawaab celin ballaadhan oo fidsan
Jawaabta soo noqnoqda waxay tilmaamaysaa kala duwanaanshaha bass, dhexda, iyo saddexleyda. Inta badan taleefoonnada dhegaha la gashado waxay leeyihiin jawaab celin joogto ah oo ah 20 ilaa 20000 Hz, taas oo ah tirada inta jeer ee la maqlo ee caadiga ah ee aadamigu maqli karo. Lambarka koowaad (20) wuxuu ka dhigan yahay inta jeer ee ugu qoto dheer ee bass, halka lambarka labaad (20000) uu yahay inta jeer ee ugu sarreeya (kala duwanaanshaha saddex-geesoodka ah) fmuser.-net in headset-ku soo saari karo.
Lahaanshaha jawaab celin ballaaran waxay la macno tahay in madaxa-madaxeedka kormeeruhu uu soo saari karo soo noqnoqoshada heerka 20 - 20000 Hz (mararka qaarkood xitaa in ka badan taas).
Guud ahaan, inta jeer ee kala duwanaanta soo noqnoqda, waa sida wanaagsan ee waayo-aragnimada dhegeysiga waxaa lagu gaari karaa sameecadaha dhegaha sida soo socota:
Nuqul ka samee inta jeer ee lagu isticmaalay duubista dhabta ah
Soo saar bas qoto dheer iyo saddexley cad.
La soco taleefoonnada dhegaha-dhegaha ma laha wanaajinta bass
La soco taleefannada dhegaha-dhegaha oo dheellitir dhammaan soo noqnoqda (hoose, dhexe, sare). Maadaama aysan jirin qayb ka mid ah codka dhawaaqa kor loo qaaday, waayo-aragnimo dhegeysi oo sax ah ayaa la gaari karaa. Dhageystayaasha caadiga ah fmuser.-net, dhageysiga badan oo bas ah taleefoonnada gacanta ayaa fure u ah waayo-aragnimo dhegeysi wacan. Dhab ahaantii, dadka qaarkiis xitaa waxay u isticmaalaan cabbirka in labada taleefoonnada gacanta ay wanaagsan yihiin iyo in kale.
Taasi waa sababta taleefoonnada gacanta ee badan ee ganacsiga maanta ay ku qalabaysan yihiin "kor u qaadida bass."
Isticmaalka taleefoonnada dhegaha-dhegaha ee kormeeraha waa waayo-aragnimo gebi ahaanba ka duwan. Sababtoo ah waxaa loogu talagalay inay si sax ah u soo saarto codka, haddii aad u duubto habkan, waxaad maqli doontaa oo kaliya bass of thumping bass. Si kastaba ha ahaatee, ayuu yidhi FMUSERRay, haddii aad is barbar barbar dhigto laba dhegood oo heer-macmiil ah (asaasiga ah), waxa laga yaabaa inaad dareento in basku aanu saamayn lahayn.
Taleefannada dhegaha la-la-socodka ayaa badanaa aad ugu raaxaysan in la xidho
Sidii hore loo sheegay, taleefoonnada dhegaha-dhegaha ayaa inta badan loo abuuray isticmaalka muddada-dheer ee qalabka istuudiyaha ee injineerada wax duuba, fannaaniinta, iyo fannaaniinta. Haddii aad waligaa aragtay dukumeentari ama muusik muuqaal ah oo lagu duubayo, waxaad ogtahay in duubista iyo isku darka muusika ay caadiyan qaadato waqti dheer.
Taasi waa sababta soosaarayaasha sameecado-madaxeedyadu ay aad ugu fiirsadaan raaxada marka ay naqshadeynayaan alaabtooda. Laba ka mid ah taleefoonnada gacanta ee isha ee istuudiyaha waa inay ahaadaan kuwo raaxo ku filan oo ay xidhan karaan muddo dheer.
Sameecado-madaxeedka kormeeraha ayaa aad u adag
Si ay ugu adkeystaan ​​jeexjeexa iyo jeexjeexyada, waxay ku qalabaysan yihiin walxo ka xoog badan, oo adkeysi leh. Xataa fiilada ayaa ka dhumuc weyn kana dheer inta caadiga ah sababtoo ah waxay iska caabin kartaa dhammaan noocyada jiidashada, jiidashada, iyo isku-xidhka. Laakin sidoo kale way ka culus yihiin taleefoonnada gacanta ee heerka macaamiisha.
Xagee laga iibsadaa La soco Sameecado-dhegaha?
Sidee ayuu Rack Audio Monitor shaqeeyaan?
Kormeeraha maqalka waa nooc ka mid ah qalabka firfircoon, oo ku qalabaysan kuwa ku hadla, wuxuu kordhin karaa awoodda wax soo saarka, guddi dhijitaalka ah ee hore, si fudud ayaa loo shaqeyn karaa. Waxa kale oo loo istcimaalaa in lagula socdo in barnaamijka maqalka ah ee la gelinayo uu sax yahay iyo in lagu kormeero tayada maqalka ka hor inta aan ugu dambayntii la gelin gudbinta FM-ta.
maxaad Rack Audio Monitor waa muhiim?
Kormeeraha maqalka ayaa inta badan loo adeegsadaa si loola socdo codka wax soo saarka heerka-stereo-ga, si loo hubiyo xakamaynta muusigga asalka ah ee dibadda iyo xakamaynta adag ee nidaamka boggaga. Kormeerayaasha guud ee maqalka ee dalka Maraykanka waxa ay ku qalabaysan yihiin capacitors isku xidhka DC ee tallo kasta si loo ilaaliyo hufnaanta signalada iyada oo aan dhalanrog, sawaxan, ama wareegyo dhulka ah (la'aanteed transformer). Naqshadeynta rack waxay awood u siineysaa kormeerayaasha maqalka ku xiran in lagu rakibo codsiyo aad u kooban, taas oo yareyneysa isticmaalka meelaha bannaan ee gudaha.
Unugyadani waxay ku habboon yihiin in loo isticmaalo xirmooyinka VTR, gawaarida wax soo saarka mobaylada, aaladaha teleconference, nidaamyada warbaahinta badan, isku xirka dayax-gacmeedka, xarumaha TV-ga cable, iyo idaacadaha.
Cutubyadani waxay ku habboon yihiin in loo isticmaalo meelaha bannaan-muquuniska ah, sida tas-hiilaadka TV-ga, istuudiyaha, xirmooyinka VTR, gawaarida wax-soo-saarka moobiilka, isku xirka dayax-gacmeedka, iyo gabi ahaanba deegaan kasta oo rack-ku-dhala oo u baahan la-socodka maqalka-channel-ka badan.
Xagee laga iibsadaa Rack Audio Monitor?
Sidee ayuu Digital FM Tuner shaqeeyaan?
Tuner-ka waxa loo isticmaalaa in lagu helo calaamadaha RF oo loogu rogo soo noqnoqoshada dhexdhexaadka ah ee hoose ee la habeeyey (IF) ama hoos u sii beddela xadhig aan la beddelin. Waa aalad hesha gudbinta soo noqnoqoshada raadiyaha (RF) sida baahinta raadiyaha oo u beddela soo noqnoqoshada gudbinta la doortay iyo xadhkaha xadhkaha goostay ee la xidhiidha soo noqnoqoshada go'an ee habbaynta dheeraadka ah. Saldhigyada gudbinta iyo kuwa qaata raadiyaha waxay helayaan calaamado yaryar. Ka dib waxaa loo rogaa haddii iyada oo loo marayo tuner-ka. Waxa kale oo loo rogi karaa habayn toos ah. Kadibna calaamada RF waxaa loo keenaa baaraha, kaas oo helaya signalka RF oo keenaya inta jeer ee codka. Cod-weyneyuhu wuxuu markaas ku kordhiyaa calaamadda dib-u-ciyaarista iyada oo la adeegsanayo taleefoonnada-madaxaha ama kuwa ku hadla. Tuneriyuhu wuxuu doortaa inta jeer ee resonant isagoo bedelaya cadadka hadda dhex socda (ama wax la mid ah). Shaqadeedu waa in ay kala soocdo mawjadda sinaha ee fmuser.-net iyo kumanaan calaamado raadiyaha ah oo ay hesho anteenadu. Xaaladdan oo kale, tuner-ka waa la hagaajin doonaa si uu u helo calaamad 680000 Hz ah. Mabda'a shaqada ee tunerku waa dhawaaq. Si kale haddii loo dhigo, Ray wuxuu leeyahay, tunerku wuu soo noqnoqda oo wuu kordhiyaa soo noqnoqoshada gaar ah, isaga oo iska indha tiraya dhammaan soo noqnoqoshada kale ee hawada.
Tunerayaashu asal ahaan waxay qaataan mowjadda tixraaca waxayna barbar dhigaan hirarkaas waxa anteenadu soo qaadato, waxaana jira dhowr nooc oo tunerayaal ah:
maxaad Digital FM Tuner waa muhiim?
Tuneriyaha FM wuxuu ka heli karaa calaamadaha FM ee saldhigyada kale wuxuuna geli karaa gudbiyaha. Waxay baahin kartaa barnaamijyada idaacadaha kale. Maalmihii hore ee baahinta, resonance of anteenada iyo inductance iyo sifooyinka awoodda la xidhiidha runtii waxay ahaayeen shayada si aad u garaacdo inta jeer ee aad rabto in aad dhegeysato. Dhab ahaantii ma beddeli doontid dhererka anteenada, laakiin waxaad hagaajin kartaa dhawaaqa adiga oo beddelaya inductor (coil) ama capacitor ku xiran anteenada. Calaamadda wax-soo-saarku waa danab AC ah, oo adiga oo ku saxaya diode (ka dibna loo yaqaan "crystal"), waxaad soo saari kartaa calaamadda loo habeeyey sidii isbeddel baaxad leh oo qaade ah. Sida FMUSER-Ray u tixgeliyo, dhammaan waa bilaa beteri!
FM-Laakiin dhab ahaantii, anteenada ku jirta raadiyaha casriga ah ee caadiga ah maaha qayb "ku xirta" inta jeer ee la doortay. Waa run in wareegga anteenadu ay ku soo noqnoqonayso guutada aad xiisaynayso, fmuser.-net, laakiin markaa signalka ballaadhan waxa lagu daraa calaamadda sinusoidal ee gudaha gudaha raadiyaha ee qaybta analoogga ah, taas oo ka jaraysa inta jeer ee soo hadhayna ka dhigaysa. suurto gal. Raadiyaha waxa uu ku shaqeeyaa xariijimo aad u fudud oo la maarayn karo (loo yaqaan haddii). Isku-darka, waxaad hagaajin kartaa saamaynta soo-dhoweynta ee soo-dhowaynta raadiyaha casriga ah ee superheterodyne. Aad bay u fududahay in la habeeyo inta jeer ee hagaajinta saxda ah halkii la bedeli lahaa dhawaaqa wareegga anteenada.
Isticmaale- Inta soo hartay ma aha fiisigiska dhabta ah, laakiin farqiga u dhexeeya raadiyaha analogga iyo raadiyaha dhijitaalka ah ayaa ku dhex jira wareegga. Asal ahaan, raadiyaha analooga ahi waxa uu soo saara calaamada habaysan ee soo noqnoqoshada dhexdhexaadka ah, kaas oo la xoojiyey oo loo diro sameecado ama raadiyaha. Baahinta dhijitaalka ah, calaamaduhu waxay u taagan yihiin nooca dhijitaalka ah ee maqalka, sida mowjada ama faylka MP3 ee kumbuyuutarku uu u yahay matalaad dhijitaal ah, waxa loo rogi karaa calaamadda analoogga ah ee loo diri karo afhayeenka. Faa'iidada tani waa in shuruudaha bandwidth ee calaamadaha dhijitaalka ah ee hawada laga yaabo in (suurtogal ah) la yareeyo, fmuser.-net si aad u dejiso calaamado badan oo isku mid ah "hawo", iyo calaamadaha dhijitaalka ah maaha kuwo u nugul buuqa. Sida Ray u qoray "haa" sababtoo ah nasiib daro, raadiyaha / TV-yada dhijitaalka ah ee badankoodu ma sameeyaan, ayuu yidhi Ray.
FMUSER. Aan ku celiyo in raadiyaha "dijital" ah, qaybaha doorta inta jeer ee la helayo ay wali yihiin analoog, laakiin inta jeer ee isku dhafan (tuned) ayaa si dhijitaal ah loo xakameeyaa oo la doortay.
Arrin kale oo xiiso leh ayaa ah raadiyaha lagu qeexay software-ka (SDR), kaas oo ah mabda'a beddelka haddii (ama xaaladaha qaarkood si toos ah inta jeer ee anteenada) loo beddelo signalka dhijitaalka ah iyo hoos u dhigista qalabka software-ka buuxa ee fmuser.-net. Maadaama ay aad uga sahlan tahay barnaamijka software cusub marka loo eego alxanka qaybaha elektaroonigga ah, tani waxay kicisay xiisaha ballaaran ee dadka xiiseeya raadiyaha.
Haddii aad ku darto SDR oo aad codsato adigoon isticmaalin wax soo noqnoqonaya oo dhexdhexaad ah (ku xidhida anteenada si toos ah beddelka analog-to-dijital iyo processor-ka signal), waxaa jira hab software saafi ah oo lagu hagaajinayo isha signalka iyadoo loo eegayo shuruudahaaga, in kasta oo aanay ahayn Habka ugu badan ee raadiyaha dhijitaalka ah uu ku shaqeeyo hadda.
Xagee laga iibsadaa Digital FM Tuner?
8. Digniin Cilad Maqal ah
Sidee ayuu Digniin Cilad Maqal ah shaqeeyaan?
La socodka gelinta maqalka, qaylo-dhaanta cilladda maqalku waxay si wada jir ah ula socon kartaa kanaalo maqal ah oo badan si loo hubiyo tayada gelinta maqalka
maxaad Digniin Cilad Maqal ah waa muhiim?
Marka laga soo tago la socodka kanaalka maqalka, waxa ugu muhiimsan waa in qaylo-dhaanta cilladda maqalku ay ogaan karto cilladda maqalka oo ay soo dirto alaarmiga waqtigeeda.
Xagee laga iibsadaa Digniin Cilad Maqal ah?
9. Korontada UPS
Sidee ayuu Korontada UPS shaqeeyaan?
Korontada aan kala go'a lahayn (UPS), oo sidoo kale loo yaqaano batteriga heeganka ah, ayaa aad u xasaasi u ah isbedbeddelka sahayda wax soo gelinta kaas oo bixisa korantada korantada marka ishaada caadiga ah ay ku fashilanto fmuser.-net ama danabku hoos ugu dhaco heer aan la aqbali karin. Waa nooc ka mid ah nidaamka sahayda tamarta joogtada ah ee heeganka ah kaas oo siiya tamarta qalabka marka korontada ugu muhiimsan ee qalabka la gooyo. UPS waxay ka kooban tahay batari, kaas oo "plugin" doona marka qalabku ogaado cilad koronto ee sahayda ugu weyn, bixinta tamarta ku kaydsan batari, fmuser.-net, supercapacitor, ama flywheel, bixinta ilaalinta dhow-isla markiiba goynta sahayda korontadu soo geliso si aaladda damisa ay u sii socoto ugu yaraan muddo gaaban. Qalabka UPS wuxuu kaloo bixiyaa ka-hortagga qalliinka. Baaxadda iyo naqshadaynta UPS ayaa go'aamisa inta ay korontadu siinayso. Nidaamka yar ee UPS wuxuu awood siin karaa dhowr daqiiqo, kaas oo ku filan inuu damiyo awoodda kombiyuutarka si habsami ah, halka nidaamka weyn uu leeyahay awood ku filan oo batari ah oo soconaysa saacado badan ilaa uu la wareegayo koronto-dhaliye.
Kor-u-qaadista guud waxa loo qaybiyaa saddexda nooc ee soo socda:
UPS Interactive Online
Ku darista koronto aan kala go'i karin xaruntaada raadiyaha waa hab wanaagsan oo lagu hubiyo in korontadu go'do waqti muhiim ah
Shaqada UPS waa mid la taaban karo oo fudud
Nuug qalliin yar oo yar.
Meesha ka saar korontada buuqa badan.
Korontada joogtada ah ee qalabka inta lagu jiro hoos u dhaca.
Qalabka si toos ah ayaa loo dami doonaa haddii ay dhacdo koronto la'aan muddo dheer.
La soco oo qor heerka awooda
Wuxuu muujiyaa isticmaalka danab / hadda ee qalabka.
Dib u bilaw qalabka ka dib koronto la'aan dheer.
Wuxuu muujiyaa danabka khadka korontada ee hadda jira.
Bixi digniinaha xaaladaha khaladka qaarkood.
Bixi ilaalinta wareegga gaaban.
Waa maxay sababta aan loo joojin karin Power Supply waa muhiim?
Koronto aan kala goyn karin (UPS) waxaa loogu talagalay inay ka ilaaliso culeysyada muhiimka ah dhibaatooyinka saadka korantada ee gaarka ah, oo ay ku jiraan korontadu, korontadu xumaato, isbedbeddelka, iyo korontadu go'an tahay. UPS waxay si gaar ah caan ugu tahay ilaalinta qalabka. Korontada UPS ee qolka rack waxay xasilin kartaa korontada waxayna siin kartaa awoodda qalabka fmuser-net waqti gaaban si looga hortago cilladda qalabka ama shaqeyn la'aanta ay keento shabakad aan degganeyn ama si looga hortago in qalabku uu joojiyo shaqada koronta awgeed. fashilka ama jabinta fmuser.-net. Xaaladaha codsiyada qaarkood ee u nugul saamaynta taban ee cilladaha korantada, sida qalabka isgaarsiinta ama kombuyuutarrada, koronto la'aanta lama filaan ah waxay sababi doontaa burbur mashiinka waxayna sababi kartaa luminta qaar ka mid ah faylasha muhiimka ah, ama xitaa dhaawacyo. fmuser.-net Si aad u hesho xarun raadiye xirfadeed oo weyn, UPS waa lagama maarmaan. Nidaamka batteriga UPS wuxuu idinka ilaalin karaa adiga iyo xarunta raadiyahaaga dhaawac haddii ay dhacdo koronto si ay qalabka idaacadaha qaaliga ah si toos ah u awoodaan fmuser-net ku orda in muddo ah iyada oo aan la socon muqaal muqaal ilaa ay awooda ugu weyni la wareegto. Cisbitaalada, bangiyada, iyo xarumaha kale ee muhiimka ah, daqiiqadahaas qaaliga ah waxay noqon karaan arrin nolol iyo geeri. UPS waxay isla markiiba ka jawaabi kartaa marka tamarta ugu weyn la gooyo, ayuu yidhi Ray, oo waxay siin kartaa awood awood leh nidaamka, ka dibna waxay siin kartaa nidaamka kaydinta isla markiiba ka dib marka la bilaabo oo uu socdo.
Xagee laga iibsadaa Aan dhiman karin Power Supply?
▲Ku noqo Qaybta Habaynta Calaamadaha Maqalka▲ or ▲Ku noqo Content▲
←Qeybtii hore waa Qaybta Habaynta Calaamadaha Maqalka- | Ku laabo
→Qaybta xigta waa Qaybta Kontoroolka Korantada | Ku laabo
Calaamadaha maqalka ee qaybta gudbinta, 9 qalab ayaa ku jira, waana (guji si aad u booqato):
Khadka Gudbinta Adag ee Coaxial
Xidhiidhiyayaasha Khadka Gudbinta
Tower Gudbinta FM
Qaybiyaha Awooda Anteenada
Anteenada Baahinta FM
Antenna Waveguide Fuuqbaxayaasha
Talooyinka ka yimid Fmuser-Ray: Si ka duwan qalabka farsamaynta maqalka, qalabka loo isticmaalo gudbinta maqalka ayaa mas'uul ka ah gudbinta calaamadaha raadiyaha ee gudbiyaasha raadiyaha, munaaradaha raadiyaha, iyo anteenooyinka raadiyaha, iwm.
1. Gudbiye FM
Sidee ayuu Gudbiye FM shaqeeyaan?
Gudbiyaha raadiyaha FM waxaa loo isticmaalaa in lagu soo qabto codka istuudiyahaaga raadiyaha oo uu ku baahiyo codka anteenada FM ilaa goobtaada raadiyaha. Gudbiyuhu wuxuu noqon karaa qalab elektaroonik ah oo gooni ah ama wareeg ah qalab kale oo elegtaroonig ah. Gudbiyaha iyo qaataha oo la isku daray hal cutub waxaa loo yaqaan transceivers. Dukumentiyada farsamada, ereyga "gudbiye" waxaa badanaa loo soo gaabiyaa "XMTR" ama "TX". Ujeedada gudbiyaasha intooda badan waa in fmuser-net ay fuliyaan isgaarsiinta macluumaadka raadiyaha masaafo gaar ah. Macluumaadka waxaa lagu siiya gudbiyaha oo ah calaamado elektaroonik ah, sida maqal (cod) signalka makarafoonka, signalka fiidyowga (TV) ee kamarada, ama, aaladaha shabakada wireless-ka, signalka dhijitaalka ah ee kombiyuutarka. Gudbiyehu waxa uu isku daraa calaamada macluumaadka ee lagu qaadi doono signalka soo noqnoqda raadiyaha si uu u dhaliyo mowjadaha raadiyaha, kaas oo loo yaqaan signalka sidaha. Habkan waxa loo yaqaan habaynta. Macluumaadka waxaa lagu dari karaa sideyaal dhowr siyaabood oo kala duwan oo noocyo kala duwan ah oo gudbiyeyaal ah. Gudbiyaha AM, ayuu yidhi FMUSER.RAY, macluumaadka waxaa lagu daraa calaamada raadiyaha iyadoo la beddelayo baaxadda. Gudbiyaha FM-ka, ku dar adigoo wax yar ka beddelaya inta jeer ee signalka raadiyaha. Noocyo kale oo badan ayaa sidoo kale loo isticmaalaa.
Calaamada raadiyaha ka socota gudbiyaha ayaa lagu dhejiyaa anteenada, taas oo soo saarta tamarta qaabka hirarka raadiyaha. Anteenada waxa lagu xidhi karaa guriga dhexdiisa ama waxa lagu xidhi karaa meel ka baxsan gudbiyaha, sida aaladaha la qaadi karo sida talefoonada gacanta, taleefoonada socod-baradka, iyo furayaasha garaashyada. Gudbiye ka awood badan, anteenadu waxa laga yaabaa inay ku taal dusha sare ee dhismaha ama munaarad gooni ah oo lagu xidho gudbiyaha iyada oo loo marayo feeder (ie khadka gudbinta).
maxaad Gudbiye FM waa muhiim?
Gudbiyaha raadiyaha FM waa qalabka ugu muhiimsan ee FM-ka raadiyaha FM-ka ee fmusernet sababtoo ah waa qalabka kaliya ee gudbiya calaamadaha maqalka oo ku sii daaya anteenada FM. Gudbiyaha FM-ta wuxuu ku badan yahay idaacadaha waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah. fmuser.-net Cudurka faafa ee sanadka 2021, muhiimada baahinta idaacada FM waxay noqotay mid aad iyo aad u caan ah, sida baahinta raadiyaha kaniisada baabuurka ee hoos yimaada cudurka faafa, iyada oo loo marayo baahinta xiriir la'aanta. Xataa baabuurka, sida uu Ray sheegay, kaliya inaad maroojiso badhamada raadiyaha baabuurka, waxaad heli kartaa ducada tayada sare leh ee wadaadka waji ka waji, fmuser -net gudbiyaha FM-ka ayaa door muhiim ah ka qaatay inbadan. iyo barnaamijyo badan oo baahinta FM-ta ah.
Xagee laga iibsadaa Gudbiye FM?
< Qaybaha Gudbinta Maqalka
2. Khadka Gudbinta Adag ee Coaxial
* Khadka Gudbinta Adag
Sidee ayuu Khadka Gudbinta Adag ee Coaxial shaqeeyaan?
Khadka gudbinta adag ee coaxial ayaa inta badan lagu isticmaalaa gudaha qolka rashka si loogu xidho furaha coax afar-dekedood, tijaabin culayska xadhkaha goostay, gudbiyaha raadiyaha FM ee kaydka ah, iyo wixii la mid ah. Waxa kale oo loo isticmaalaa meel ka baxsan qolka rashka si kor loogu qaado munaaradda anteenada. fmuser.-net RF calaamadaha waxaa lagu soo rogaa gudbiyaha ilaa anteenada iyada oo loo marayo fiilooyinka coaxial leh hawo ama xumbo dielectric, khadadka coaxial adag, ama iyada oo loo marayo waveguides adag oo leh labajibbaaran, wareeg ama elliptical cross-section - cilmi baaris ka Ray. Cabirka fiilooyinka iyo xadhkaha adagi way kala duwan yihiin iyadoo ku xidhan awoodda la kala qaado iyo inta jeer ee la kala qaado.
maxaad Khadka Gudbinta Adag ee Coaxial waa muhiim?
Khadka Gudbinta adag ayaa guud ahaan loo isticmaalaa in lagu gudbiyo calaamadaha soo noqnoqda ee la mid ah calaamadaha indhaha ee ay gudbiyaan fiilooyinka indhaha. Waa qayb isku xidha gudbiyaha, kaas oo lagu isticmaalo fiilooyinka. fmuser-net Mawjada elektromagnetic waxay ka tarjumaysaa hore iyo gadaal inta u dhaxaysa xariiqda xudunta ah iyo quudiyaha. Lakabka gaashaanku wuxuu ka hortagi karaa calaamadda faragelinta dibadda inay soo gasho, iyo sidoo kale si wax ku ool ah u yareeya luminta calaamadaha waxtarka leh ee shucaaca.
Xagee laga iibsadaa Khadka Gudbinta Adag ee Coaxial?
Sidee ayuu RF Coaxial Cable shaqeeyaan?
Xarkaha Coaxial waa nooc ka mid ah fiilada wareegta ah ee leh kirishboyga korantada ee xoogga leh iyo lakabka walxaha. Qaab dhismeedkeedu waa mid fudud. Qaybta kirishbooyada dhexe inta badan waa mid adag ama tidcan silig khafiif ah oo naxaas ah. FMUSER-net Waxa ku wareegsan siligga lakabka dielectric oo ka kooban walxo daaha ka sameysan, qeybta sare ee lakabka dielectric waxaa ku hareereysan sunta rasaasta ama birta waxaana lagu ilaaliyaa jaakad dahaaran. Lakabka gaashaanka birta ee dibadda ah wuxuu inta badan ku qotomaa labada daraf ee xiriiriyaha si uu u difaaco calaamada oo uu u dhaqmo sida meel calaamad ah oo faragelin ah. Fiilada Coaxial waxaa loogu talagalay in lagu gudbiyo calaamadaha soo noqnoqda sare ama ballaaran ee hoos yimaada RF, kaas oo inta badan loo isticmaalo gudbinta tamarta RF. Farqiga u dhexeeya fiilada coaxial iyo fiilooyinka kale ee gaashaanka ah ayaa ah in cabbirka fiilada iyo isku xirka la xakameeyo si loo bixiyo fogaan sax ah oo joogto ah, ayuu yidhi Ray.
Furaha naqshadeynta fiilada coaxial waa xakamaynta adag ee cabbirka iyo walxaha. Si wada jir ah, waxay hubiyaan in cilladda dabeecadda ee fiilada ay tahay qiime go'an. Calaamadaha soo noqnoqda sare ayaa qayb ahaan ka muuqan doona marka is-waafajin la'aantu dhacdo, taas oo horseedaysa qalad.
Sida laga soo xigtay cilmi-baarista Ray. qaabka caadiga ah ee cable coaxial waa sida soo socota:
Noocyada Caadiga ah ee Cable Coaxial
Waxaa jira noocyo badan oo fiilooyinka coaxial, kuwaas oo qaarkood ay ka mid yihiin:
Xarig coaxial adag
xadhig adag oo coaxial ah
Kabka Coaxial Semi-adag iyo Semi- dabacsanaan karo
Coaxial Cable dabacsan
Xargaha Coaxial Leaky
Cable Coaxial oo tidcan
maxaad RF Coaxial Cable waa muhiim?
Coaxial cable waxay leedahay waxqabad aad u fiican inta jeer ee sare. Waxay ka kooban tahay dahaadh dhexe oo dahaaran oo lagu daboolay lakabka gaashaanka. Calaamadaha waxaa lagu kala qaadaa inta u dhaxaysa lakabka gaashaanka iyo kaarida dhexe. Qaab dhismeedkani wuxuu hubinayaa in calaamaduhu ku xiran yihiin fiilada, waxay ka hortagtaa qaylada korantada inay farageliso calaamadda, fmuser.-net waxayna ku haysaa calaamadda gudaha fiilada, sidaas darteed waxay leedahay waxqabadka EMI-ga ee ugu fiican / ilaalinta, taas oo ah sababta fiilooyinka coaxial ay yihiin. Inta badan waxaa loo isticmaalaa in lagu gudbiyo calaamadaha koronto ee soo noqnoqda ee hooseeya, sida qaadista calaamadaha raadiyaha (sida codsiyada baahinta halka gudbiyaasha iyo qaataha ay ku xiran yihiin anteenooyinka), fmuser - calaamadaha fiidiyowga saafiga ah (sida calaamadaha TV-ga cable), calaamadaha cabbirka iyo calaamadaha xogta. (sida nidaamyada shabakadaha, taleefoonnada, fiilooyinka internetka ee ballaadhan Xadhkaha Coaxial ayaa sidoo kale loo isticmaalaa baabuurta, diyaaradaha, militariga, iyo qalabka caafimaadka, iyo sidoo kale anteenooyinka dayax-gacmeedka ee qaabka saxan, anteenooyinka raadiyaha iyo telefishinka.
Xagee laga iibsadaa RF Coaxial Cable?
4. Khadka gudbinta Xidhiidhiyayaasha
* RF iyo Microwave Multiplexer
Sidee Xidhiidhiyayaasha Khadka Gudbinta shaqeeyaan?
Xidhiidhiyayaasha quudiyaha RF waxa loo isticmaalaa in lagu xidho laba shay oo ah xadhkaha gudbinta ee isku xidhan ee soo noqnoqda raadiyaha awooda sare ama adag (khad dabacsan). Caadi ahaan kuwan ayaa kaliya looga baahan yahay rakibaadaha gudbinta awoodda aadka u sarreeya (10s ee kW ilaa MW) halkaasoo dhexroorka khadka quudku uu noqon karo dhowr inji. Hal dhinac oo ka mid ah isku xirka waxa loo tilmaansadaa sida isku xidhka lab, ama xabbad, halka dhinaca kale loo tilmaamay sida xidhiidhka dheddigga, ama koob.
maxaad Xidhiidhiyayaasha Khadka Gudbinta waa muhiim?
Inta lagu jiro baahinta, kuleyliyaha RF ee isku xirayaasha gudaha iyo dibadda waxay sababaan fidin kala duwanaansho ah oo dhexdooda ah. Iyada oo leh naqshadda asalka ah ee khadka gudbinta adag, fmuser - net balaarintaan waxaa lagu magdhabaa rasaas bir ah oo simbiriirixan leh. Ugu dambeyntii, tani waxay soo saartaa daal, dhibco kulul-iyo gubasho. Waxaa lagu talinayaa in la beddelo qalabkan toddobadii sanoba mar si looga fogaado fashil degdeg ah.
Xagee laga iibsadaa Xidhiidhiyayaasha Khadka Gudbinta?
Sidee ayuu RF Multiplexer shaqeeyaan?
Multiplexer waa aalad u oggolaanaysa macluumaadka dhijitaalka ah ee ka imanaya ilo dhowr ah in lagu maro hal xariiq si loogu gudbiyo hal meel. Demultiplexer-ku wuxuu sameeyaa hawl-galka dib-u-celinta. Waxay ka qaadaa macluumaadka dhijitaalka ah hal xariiq waxayna u qaybisaa tiro la siiyay oo ah khadadka wax soo saarka. Isku dhufashada waa habka gudbinta macluumaadka laga soo qaado wax ka badan hal il fmuser.-net una gudbisa hal calaamad oo ay bixiso warbaahinta la wadaago. Nidaam kasta oo isgaarsiineed oo ah mid dhijitaal ah ama analoog ah, waxaan u baahanahay kanaalka isgaarsiineed ee gudbinta. Kanaalkani waxa uu noqon karaa mid silig ah ama xidhiidhiye bilaa fiilo ah. Maaha wax la taaban karo in loo qoondeeyo kanaalo gaar ah isticmaale kasta. Sidaa darteed koox calaamado ah ayaa la isku daraa waxaana loo diraa kanaalka guud. Tan waxaan u isticmaalnaa qalab badan. Waxaan isku dhufsan karnaa jilitaanka ama calaamadaha dhijitaalka ah. Haddii calaamadda analoogga la kala badsado, noocaan oo kale waxaa loo yaqaannaa Multiplexer. Haddii calaamadda dhijitaalka ah la kala badsado, nooca Multiplexer-ka waxaa loo yaqaannaa Multiplexer.
maxaad RF Multiplexer waa muhiim?
Waxaan u wareejin karnaa tiro badan oo calaamado ah hal dhexdhexaad ah. Kanaalka waxa uu noqon karaa mid dhex dhexaad ah sida fiilada shaft-ka, kooriyaha birta ah, ama isku xirka wireless-ka, iyo tirada calaamadaha waa in hal mar la farsameeyaa. Sidaa darteed, kharashka wareejinta waa la dhimi karaa. Xataa haddii gudbintu ku dhacdo isla kanaalka, maahan inay dhacaan isku mar. Caadi ahaan, isku dhufashada waa farsamo ay calaamado badan oo fariin ah la isugu geeyo calaamad isku dhafan si calaamadahan fariinta loogu gudbiyo kanaalka caadiga ah. Sida Rays la helay, si ay u gudbiyaan calaamadaha kala duwan ee isla kanaalka, waa in la kala saaraa calaamadda si looga fogaado faragelinta dhexdooda, ka dibna waxay si fudud u kala saari karaan dhammaadka helitaanka.
Xagee laga iibsadaa RF Multiplexer?
6. Tower Gudbinta Raadiyaha FM
Sidee ayuu Tower Gudbinta FM shaqeeyaan?
Taawarada warbaahintu waa dhismayaal dhaadheer oo loogu talagalay in lagu taageero anteenooyinka isgaarsiinta iyo baahinta, oo ay ku jiraan telefiishanka, oo sida caadiga ah loo isticmaalo gudbinta adeegyo isgaarsiineed oo kala duwan oo ay ku jiraan raadiyaha iyo telefishanka.
maxaad Tower Gudbinta FM waa muhiim?
munaaraddu waxay u shaqayn doontaa sidii anteeno lafteeda ama waxay taageertaa hal ama in ka badan anteenooyinkooda qaabdhismeedkooda sababtoo ah waa inay soo diraan calaamado awood leh masaafo dheer, oo ay ku jiraan suxuunta mikrowaytka. Anteenooyinkani waxay sii daayaan soo noqnoqda shucaaca (RF) tamarta korantada (EME). Laakiin uma baahnid wax ka weyn TV-gaaga ama raadiyahaaga guriga: anteeno aad uga yar ayaa si fiican u qaban doonta shaqada.
Xagee laga iibsadaa Tower Gudbinta FM?
7. Qaybiyaha Awooda Anteenada ee Anteenada Lakabka Badan
*FMUSER FU-P2 FM Qaybiyaha Korontada Anteenada - Inbadan
Sidee ayuu Qaybiyaha Awooda Anteenada shaqeeyaan?
Qaybiyaha tamarta anteenadu waa aalad u kala qaybisa awoodda (si siman) labada dekedood ee wax soo saarka ah ee ka imanaya hal deked wax gelin ah ama isku daraya laba anteeno oo qaabaysan una soo bandhigaya 50-ohm xamuulka gudbinta/qaadayaasha isku darka ama transceiver. Xaaladda ugu habboon, qaybiyaha awoodda waxaa loo tixgelin karaa khasaare la'aan, laakiin ficil ahaan, mar walba waxaa jira qayb ka mid ah fmuser-net power. Qaybiye/isku-darku wuxuu noqon karaa qayb-mawjadaha rubuc-mawjada ee khadka gudbinta ama waxay noqon kartaa qayb mawjadda badhkeed. Aragti ahaan, qaybiyaha awoodda iyo isku-darka korantadu waxay noqon karaan isla qayb isku mid ah, laakiin ficil ahaan, waxaa jiri kara shuruudo kala duwan oo loogu talagalay isku-dariyeyaasha iyo qaybiyeyaasha, sida maaraynta awoodda, isbarbardhigga wajiga, isku-dheellitirka dekedda, iyo go'doominta. Qaybiyasha awooda waxaa inta badan loo tixraacaa kala qaybiyayaal. Iyadoo tani ay tahay mid farsamo ahaan sax ah, injineeradu waxay sida caadiga ah xafidaan ereyga "kala-bax" si ay ula jeedaan qaab-dhismeed iska caabin ah oo jaban oo kala qaybiya awoodda xajmiyeed aad u ballaaran laakiin leh khasaare badan iyo xakamaynta awoodda xaddidan.
maxaad Qaybiyaha Awooda Anteenada waa muhiim?
Markaad u baahan tahay inaad isticmaasho anteeno lakabyo badan oo gudbiyahaagu leeyahay hal interface RF, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho qaybiyaha tamarta anteenada. Shaqadeedu waa in ay u qaybiso hal-is-dhex-dhexaadiyaha RF-ga gudbiyaha una kala qaybiso isku-xidhka RF-ga "badan" oo ay ku xidho is-dhexgalyadan anteenada lakabka badan. Isla mar ahaantaana, qaybiyaha korantadu wuxuu u qaybin doonaa awoodda RF ee gudbiyaha si siman lakab kasta oo anteenooyinka ah, ayuu yidhi Ray.
Xagee laga iibsadaa Qaybiyaha Awooda Anteenada?
8. Anteenada Baahinta FM
FMUSER Anteennada CP100 ee Wareega ah - Inbadan
Sidee ayuu Anteenada Baahinta FM shaqeeyaan?
Anteenadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhammaan qalabka raadiyaha, sida caadiga ah, anteenada waxaa loo isticmaalaa gudbiyaha ama qaataha. Qaadashada anteenada FM tusaale ahaan, anteenada FM waxay u shaqeysaa sidii dhexdhexaad si ay u bedesho signalka korantada RF una beddelo fmuser. Sida caadiga ah, marka la gudbinayo calaamadaha gudbiyaha, terminaalka anteenada waxay helayaan hadda ay bixiyaan gudbiyeyaasha raadiyaha, ka dibna anteenadu waxay ka soo ifbaxdaa tamarta hadda ee gudbiyaha raadiyaha ee qaabka hirarka raadiyaha; Marka ay gaadho dhamaadka helitaanka, anteenada ku taal dhamaadka helitaanka waxay dhexda u gali doontaa qayb ka mid ah awooda hirarka raadiyaha ee ka soo ifbaxday anteenada gudbiyaha, ka dibna waxay dhalin doontaa hadda joogitaanka terminalka, fmuser. net iyo ugu dambayntii in la nuugo oo beddelo qaataha ee soo dhaweynta. Tusaale ahaan, raadiyaha wuxuu ka sii dayn karaa barnaamijka raadiyaha ee raadiyaha, kaas oo ah qaataha, raadiyahana waa gudbiyaha. Waxaa xusid mudan in anteenada loo qaabayn karo in ay si siman u gudbiso oo ay u hesho hirarka raadiyaha si siman (oo dhan) ama jiho gaar ah ( faa'iido jiho ah ama mid sare ama anteenada "beam") si siman dhammaan jihooyinka toosan. Anteenadu waxa ku jiri kara qaybo fmuser.-net ah oo aan ku xidhnayn gudbiyaha, muraayadaha paraboloid, gees, ama curiyayaasha dulin ee haga mowjadaha raadiyaha si ay u noqdaan alwaaxyada ama qaababka kale ee loo baahan yahay shucaaca. Haddii aad rabto in aad kordhiso kala duwanaanshaha shucaaca ee mowjadaha raadiyaha, waa inaad haysataa soo-qaade xooggan.
maxaad Anteenada Baahinta FM waa muhiim?
Muhiimadda anteenooyinku waa inay gudbiyaan ama helaan hirarka raadiyaha iyo is-beddelka calaamadaha (sida qoraalka, sawirrada, iyo macluumaadka) iyadoo loo eegayo booska dhabta ah (gudbinta ama dhameynta), iyo noocyada anteenooyinka caadiga ah waxay leeyihiin baararka birta ah iyo anteenooyinka saxanka, FM baahinta Goobta, anteenada baahinta FM waxay u qaybsantaa anteenada gudbinta iyo anteenada hesha. Anteenada dhamaadka heshaa waxay u rogi kartaa signalka korantada mowjadaha raadiyaha, anteenada dhamaadka heshana waxay u badashaa calaamadaha mowjadaha raadiyaha una rogaan calaamadaha korantada. Anteenada FM iyo gudbiyaha FM waa furayaasha ku dhawaad ​​dhammaan noocyada isgaarsiinta. Nolol maalmeedkeena, fmusernet-ka waxaan inta badan la kulmaa isgaarsiinta wireless-ka, sida idaacadaha, dadku waxay ku dhageysan karaan barnaamijyada raadiyaha raadiyaha, waa anteenada FM-ta ee isgaarsiinta Mid ka mid ah xaaladaha codsiga muhiimka ah. Maadaama anteenadu ay tahay saldhigga isgaarsiinta wireless-ka, waxaa jira codsiyo kale oo badan oo maalinle ah, sida gudbinta signalka TV-ga, isgaarsiinta satellite-ka, dareenka fog, iyo codsiyada caafimaadka noolaha.
Xagee laga iibsadaa Anteenada Baahinta FM?
Sidee ayuu RF dummy load shaqeeyaan?
Habka tijaabinta nidaamka RF, culeyska dhumugga ah (sidoo kale loo yaqaan anteenada dummy) wuxuu u dhaqmaa sidii "anteenada" dhabta ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sawiro culeyska qalabka korontada, kaas oo ku xiran wax soo saarka raadiyaha. Waxa loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo oo lagu habeeyo gudbiyaha ama qaataha iyada oo aan la soo saarin mowjadaha raadiyaha. Culayska dumay wuxuu inta badan ka kooban yahay iska caabin ku xiran hiitarka kaas oo ka saaraya koronto- gudbiyaha, ayuu yiri Ray.
maxaad RF dummy load waa muhiim?
Marka lagu daro in laguu oggolaado inaad si sax ah u hagaajiso cabbirada gudbiyaha iyo qaataha, culeyska qashinka ah wuxuu sidoo kale ka hortagi karaa waxyeellada qalabka ay keento qaladka. Injineerada xirfadlayaasha ah ee RF waxay dhamaantood og yihiin in culeyska ba'an uu yahay aalad lagu raro rarka qalabka si loogu tijaabiyo cod-weyneeye ama nidaamka RF. Haddii aad si toos ah u isticmaashid anteenada halkii aad ka isticmaali lahayd fmuser-netka xamuulka ah inta lagu jiro tijaabada, kaliya maaha inaad si fiican u dhegaysan kartid, kulaylka ay dhaliso awoodda RF waxay si toos ah u dhaawacaysaa gudbiyahaaga ama soo-dhoweeyahaaga. Culayska dumay waxaa lagu sawiri karaa anteenada si fiican u habaysan oo ku xidhan cod-weyneeye waxay ka fogaan kartaa habayn aan habboonayn ama waxyeelo soo gaadha qalabka RF. Sidaa darteed, waxaan si adag kuugula talineynaa inaad doorato culeys la isku halleyn karo oo dhumucdiisuna tahay oo aad u isticmaasho waqti iyo si sax ah markaad tijaabinayso qalabka RF si aad uga fogaato khasaaro aan loo baahnayn.
Xagee laga iibsadaa RF dummy load?
10. Anteenada Waveguide Biyo-bixiye
* Biyo-bixiyeha hirarka anteenada
Sidee ayuu Waveguide Dehydrator shaqeeyaan?
Fuuqbaxa Waveguide waxa loo isticmaalaa in lagu bixiyo hawo qalalan oo iskiis ah iyo munaaradaha gudbinta signalada (sida microwave, radar, system anteeno, dhulka dayax gacmeedka ee TV) iyo qaybaha la xidhiidha dhinacyo kala duwan. Waxaa habboon in la ogaado in si loo hubiyo tayada gudbinta calaamadaha, cadaadiska hawada ee ciriiriga ah ee ay bixiso mawjada guud ee fmuser.-net waxay ka badnaan doontaa cadaadiska atmospheric. Dhanka kale, waxay ka hortagtaa in biyuhu soo galaan, waxay ka fogaanayaan uumi hawada, waxayna gaaraan saamaynta ugu qallalan; dhanka kale, waxa ay ka fogaataa saamaynta ay cimiladu keento. Weel yar oo cadaadis ah ayaa lagu rakibay fuuq-baxa mawjadaha si loo hubiyo wareegga bilawga halkii uu si joogto ah u shaqeyn lahaa kombaresarada muhiimka ah.
Dareemaha cadaadiska kala duwan ayaa xakameynaya shaqada kombaresarada. Weelku waxa uu kaydiyaa hawo qalalan oo cadaadis sare leh waxaana lagu shubaa hagaha mawjada iyadoo cadaadis hoose uu dejiyay maamuluhu. Waqtigan xaadirka ah, qaar badan oo ka mid ah fuuq-baxayaasha waveguide ee suuqa ayaa ku dhisay nidaamka elektiroonigga ah ee waqtiga iyo ilaalinta qoyaanka, kaas oo ogaan kara qaar ka mid ah dhibaatooyinka lama filaanka ah ee fuuq-baxayaasha waveguide xawaaraha ugu dhakhsaha badan, taas oo ah, dhibaatada ay keento kaydinta ku filan ee hawada qalalan. Iyada oo ku saleysan cilmi-baarista Ray, hawl-wadeenku wuxuu si ula kac ah u soo bandhigi karaa qadar yar oo hawo ah si loo hubiyo in hawada ku jirta nidaamka waveguide si joogto ah loo beddelo marka loo baahdo si loo kordhiyo faa'iidooyinka mawjadaha fuuq-baxa.
maxaad Waveguide Dehydrator waa muhiim?
Sababtoo ah qaybo ka mid ah waveguide waxay keeni doonaan milicsi iyo calaamad lumis ama attenuation, fuuq-baxiyuhu wuxuu ku hayn karaa jawi nadiif ah, qalalan, iyo qayb ka xor ah waveguide, oo hawo socodka hawada ee tuubada quudinta, si looga hortago anteenada SWR aad u sarreeya ama silig gaabsan oo ay sababto qoyaan. Sidaa darteed, fuuq-baxa waveguide ayaa door muhiim ah ka ciyaara inta badan codsiyada isgaarsiinta.
Xagee laga iibsadaa Waveguide Dehydrator?
▲Ku noqo Qaybaha Gudbinta Maqalka▲ or ▲Ku noqo Content▲
←Qeybtii hore waa Qaybaha Gudbinta Maqalka- | Ku laabo
→Qaybta xigta waa Qaybta Taakulaynta Agabka | Ku laabo
Qeybta kontoroolka korantada, 6 qalabyada aasaasiga ah ayaa lagu daray, waana (guji si aad u booqato):
mitirka la socodka awooda iyo tamarta
Qalabka Ilaalinta Qulqulka
Maareeyaha Logic ee Barnaamijyada
"Qalabka ku jira qaybta kontoroolka korantada waxaa loo isticmaalaa la socodka iyo xakamaynta xuduudaha shaqada ee qalabka qolka rack radio, kaas oo hubinaya badbaadada qalabka.
1. Beddelka Mindida
*Laba tiir Middi Bedel ah
Sidee ayuu Beddelka Mindida shaqeeyaan?
Beddelka mindida (oo sidoo kale loo yaqaanno beddelka mindida ama kala-goynta) waa nooc ka mid ah beddelka xiriirinta dhaqaaqa -- beddelka mindida, kaas oo la jeexjeexay (ama kala go'ay) oo leh xiriir go'an --hayaha mindida ee salka si loogu xiro (ama ka gooyo) wareegga. Beddelka mindida waa mid ka mid ah qalabka korantada ee korantada yar ee ugu fudud uguna ballaaran ee loo isticmaalo qalabka gacanta lagu hago. Waxaa guud ahaan loo adeegsadaa AC iyo DC wareegyada korantada hooseeya (aan ka badnayn 500V) kuwaas oo aan u baahnayn in fmuser-net la gooyo oo la xidho si joogto ah. Marka la eego korantada la qiimeeyay, hadda shaqadeeda kama badan karto fmuser.-net qiimaha la qiimeeyay. Qalabka mashiinka, dareemaha mindida waxaa inta badan loo isticmaalaa sidii dab-demiska, guud ahaan looma isticmaalo in lagu shido ama la gooyo hadda shaqeeya ee matoorka. Dareemaha mindida sida caadiga ah loo isticmaalo waa HD nooca hal tuurista mindida, HS nooca labajibbaaran mindida tuurista (wareejinta mindida), nooca HR nooca fiyuuska mindida, nooca isku dhafka HZ, beddelka nooca HK, beddelka nooca HY, iyo nooca HH nooca birta beddelo, iwm, ayuu yidhi Ray-fmuser.
maxaad Beddelka Mindida waa muhiim?
Dareeshka mindida wuxuu go'doomiyaa sahayda korontada si loo hubiyo badbaadada wareegga iyo dayactirka qalabka ama sida aan joogto ahayn isku xidhka iyo jebinta culeyska ka hooseeya kan hadda la qiimeeyay.
Shimbiraha mindida ayaa jebiya culeyska, sida isku xirka iyo jebinta wareegga hooseeya ee awoodda yar ama si toos ah u bilaabo matoorka awoodda yar.
Marka mindidu ay ku taal meel bannaan, si cad ayaa loo arki karaa, taas oo hubin karta badbaadada shaqaalaha dayactirka wareegga.
Furaha mindida go'doomiya sahayda korontadu waxa kale oo loo yaqaan furaha xidhidhiyaha. Middida beddelka ee go'doominta guud ahaan waa qalab aan wax rarar ah saarnayn, kaas oo samayn kara oo kaliya ama jebin kara "xaqa dayacan" (waxaa loola jeedaa awoodda hadda ee baska oo leh danab, fiilo gaaban, ama koronto beddele). Qaar ka mid ah furayaasha mindida waxay leeyihiin awoodo damin ah oo gaar ah. Marka awoodoodu off-off ay ku haboon tahay wakhtiga loo baahan yahay, waxay shidi karaan ama damin karaan qayb ka mid ah qalabka korantada ee fmuser-net ama waxay dhamaystiri karaan qalabka xaaladaha aan cillad lahayn. Furaha mindida loo isticmaalo sida goynta waa inuu buuxiyaa shaqada go'doominta, taas oo ah, jabka beddelka waa mid muuqda, masaafada jabku waa mid u qalma. Inta lagu jiro dayactirka qalabka korantada, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo tamarta korontada si looga dhigo mid ka sooca qaybta nool, iyo ilaalinta fogaansho wax ku ool ah. Waxa Ray helay: Waxaa loo baahan yahay in heerka korantada adkeysiga ee overvoltage la adkeysan karo inta u dhaxaysa qaybaha kala qaybsan. Sida uu sheegay Ray. dareesha mindida waxaa loo isticmaalaa sidii qalab beddelaad si loo go'doomiyo sahayda korontada.
Beddelka mindida iyo fiyuuska ayaa si isdaba joog ah isugu xiran si ay u sameeyaan unug, kaas oo loo yaqaan kooxda fiyuuska beddelka mindida ama kooxda fiyuuska beddelka ee kala goysa; Marka qaybta dhaqaaqi karta (xidhiidhka dhaqaaqa) ee beddelka mindida ay ka kooban tahay fiyuuska sidda qaybo leh isku xirka fiyuuska, waxaa loo yaqaannaa furaha mindida furaha ama fiyuuska furaha furaha furaha. shabaqa. Fiyuuska wareejinta waxa lagu daraa qaybo caawiye ah, sida kabaalka hawlgalka, guga, mindida arc, iwm
Xagee laga iibsadaa Beddelka Mindida?
aan khalad ahayn
< Guddiga Xakamaynta Korontada
2. Mitirka Korontada
* Mitirka Korontada Dhaqanka
Sidee ayuu Mitirka Korontada shaqeeyaan?
Mitirka korontada (sidoo kale loo yaqaan mitir koronto, mitir koronto, mitir koronto, ama mitir tamarta) waa aalad lagu cabbiro tamarta korantada ee ay isticmaasho guryaha, ganacsiga, ama qalabka korontada ee fmuser-net. Mitirka korantada waxaa loo qaybiyaa mitirka dhijitaalka ah iyo mitirka analooga ah. Rakibaadda iyo biilasha kama dambaysta ah ee mitirka korantada waxaa badanaa loogu talagalay shirkadaha korontada. Shaqaalaha shirkadaha korontadu waxay ku rakibi doonaan mitirka korontadu halka ay u baahan yihiin inay ku isticmaalaan mitirka korontada, waxayna si joogto ah ula socdaan oo ay u dalacayaan isticmaalayaasha iyaga oo isticmaalaya cabbirada mitirka. Marka gurigaagu koronto ka helo siliga, go'an pinions ee mitirka ayaa dhaqaaqa. Kacaanka waxaa lagu duubaa garaaca aad aragto marka aad eegto mitirka fmuser.-net. Xawaaraha wareegtada waxaa lagu go'aamiyaa awooda la isticmaalo. Mabda'a shaqada ee qaar ka mid ah qalabka kale ee cabbiraadda tamarta, ayuu yidhi Ray, waxay la mid yihiin mitirka korontada, sida mitirka gaasta, waa in la cabbiro xoogga dhaqdhaqaaqa gaaska ee dhuumaha. Kordhinta socodka gaaska, garaaca ayaa si dhakhso ah u wareega, taas oo macnaheedu yahay gaas badan ayaa la isticmaalaa. Waxaa xusid mudan in akhriska korontadu uu inta badan ku jiro kWh iyo hadday tahay mitirka dhijitaalka ah ama mitirka analooga ah, kWh ee korontada la isticmaalo ee lagu soo bandhigay bandhigga dib looma dejin doono. Markay shaqaalaha shirkadda korontadu akhriyaan korontadda la isticmaalo bisha (toddobaad) ee lagu soo bandhigay mitirka, kaliya waxay u baahan yihiin inay ka jaraan tirada dhammaadka bisha si ay u xisaabiyaan qaddarka biilka qoys kasta iyo lacag.
maxaad Mitirka Korontada waa muhiim?
Waxaa laga yaabaa inaadan fiiro gaar ah siinin isbeddelada cabbirrada mitirka, laakiin waa inaad taqaanaa sida loo ilaaliyo nambarada ku yaal guddiga mitirka, si aad ula socoto inta tamarta aad isticmaasho bil kasta ama toddobaad kasta marka loo eego bishii hore. ama usbuuca, oo hubi biilka lagaa rabo inaad bixiso shirkadda korontada oo xisaabi naftaada adigoo isticmaalaya xisaabaadka fudud Farqiga u dhexeeya qadarka dhabta ah ee biilka, si loo hubiyo in aysan ku bixin lacag aan loo baahnayn.
Inkasta oo noocyada mitirka korontada ee suuqa aysan ahayn mid la mid ah hadda, waxaa jira faa'iidooyin badan oo ku saabsan isticmaalka mitirka korontada ee dhijitaalka ah ee macaamiisha tamarta iyo alaab-qeybiyeyaasha tamarta. Macaamiisha, qiimaha korantada ee xilliga baahida xooggan (6:00 pm - 11:00 galabnimo) ayaa inta badan ka hooseeya inta lagu jiro xilliga baahida hoose (0:00 subaxnimo - 7:00 galabnimo) a. Haddii aad isticmaashid akhriska mitirka toosan ee caadiga ah (AMR), waxaad wax badan ku bixin doontaa biilka korontada, sababtoo ah AMR waxay la socon doontaa isticmaalkaaga korontada shirkadda korontaduna waxay kugu soo dalacaysaa koronto iyadoo loo eegayo celceliska qiimaha wareeggii hore ee fmuser.-net. Isticmaalka mitirka dhijitaalka ah ayaa si sax ah ula socon kara isticmaalka tamarta si ay tamar-qeybiyahaagu u go'aamiyo tirada gaarka ah ee korontada aad isticmaasho, iyo sidoo kale go'aamiso markaad isticmaasho korontada, si aad uga fogaato kharashyada biilka korontada ee aan loo baahnayn. Alaabta tamarta korontada, isticmaalka mitirka smart ayaa ku habboon shaqaalahooda. Halkii la tirin lahaa korontada uu qoys walba isticmaalo, waxay si toos ah u akhrin karaan cabbirada ku yaal guddida mitirka iyagoo isticmaalaya isgaarsiin fog, taas oo aad u yaraynaysa kharashka hawlgalka iyo kharashka shaqada ee shirkadaha korontada.
Xagee laga iibsadaa Mitirka Korontada?
3. Qalabka Korjoogteynta iyo Xakamaynta Awoodda
*Nooca Daaqadda Transformer-ka Hadda
Sidee ayaa Transformer Tamarta shaqeeyaan?
Current Transformer (CT) waa nooc ka mid ah qalabka wax ka bedela, kaas oo u rogi kara tamarta sare ee hadda jirta una rogi karta hadda dan yar, yacni, ka beddelka hadda ka qiimo sarreeya una beddelo hadda saamiga ka dibna qiimaha hoose u beddela. Marka loo eego qaab-dhismeedkeeda shaqo, transformers-yada hadda jira waxa loo qaybin karaa nooca bar, nooca dhaawaca, iyo nooca daaqadda. Marka loo eego dabeecadeeda, CT waxa loo qaybin karaa laba nooc: ilaalinta hadda taagan iyo cabbirida transformers fmusernetka. Waxaa ka mid ah, transformers-yada hadda jira ee ilaaliya ayaa mas'uul ka ah cabbiraadda hadda, tamarta, iyo awoodda (la isticmaalo qalabka kale ee cabbiraadda), halka cabbiraadaha hadda jira lagu wada isticmaalo gariiradda safarka, gudbinta, iyo qalabka kale ee ilaalinta.
maxaad Transformer-ka hadda jira waa muhiim?
Transformer-ka hadda jira waa mid ka mid ah walxaha muhiimka ah ee nidaamka korantada, kaas oo si weyn loogu isticmaalo cabbiraadda iyo la socodka tamarta sare ee hadda iyo sare. Isticmaalka ammeter-ka caadiga ah, socodka hadda socda ee khadka gudbinta AC ayaa si badbaado leh loola socon karaa. Tusaale ahaan, Transformer-ka hadda waxa loo isticmaali karaa in uu noqdo darawalka xudunta u ah mitirada korantada ee waaweyn ee ganacsiga iyo warshadaha. Sida Ray leeyahay, Transformers hadda waxa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu bixiyo saamiga hadda jira ee awoodda qalabkan iyo in laga saaro qalabka wax lagu cabbiro wareegyada tamarta sare.
Xagee laga iibsadaa Transformer-ka hadda jira?
4. Qalabka Ilaalinta Qulqulka
*Aalladda Ilaalinta Qalliinka
Sidee ayuu Qalabka Ilaalinta Qulqulka shaqeeyaan?
Qalabka ilaalinta qalliinka (SPD), oo hore loogu yiqiin xakamaynta korantada ku-meel-gaadhka ah (TVSS) ama xakamaynta sare ee sare (SSA), waa nooca ugu badan ee la isticmaalo uguna waxtarka badan ee ilaalinta korantada, kaas oo loogu talagalay in laga hortago korontadu fmuser .net ama "transients". Qalabka elektaroonigga ah ee waxyeellada u geysta, kaas oo inta badan ku xiran isbarbardhigga wareegga korantada ee culeyska. Sida qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka ilaalinta rakibaadda korantada, marka korantada ku meel gaadhka ah (sida garaaca hillaaca ama dhaawaca khadka korantada) uu si lama filaan ah uga soo muuqdo wareegga ilaalinta, SPD waxay xaddidaysaa tamarta ku meel gaadhka ah waxayna hadda ku celisaa isha ama dhulka. Marka danabku gaaro meel cayiman, ilaaliyaha qalliinka wuxuu si fudud u qaybin karaa tamar dheeraad ah iyadoo loo eegayo shaqada valve xasaasiga ah nuxur ahaan. Korantada saxda ah, hadda waxa uu si caadi ah u socon doonaa. Qalabka ilaalinta qalliinka fmuser -net sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa dhammaan heerarka shabakada korontada, SPD waxay ku jirtaa xaalad kacsanaan ah oo hoos timaada korantada hawlgalka caadiga ah mana saameynayso nidaamka. Marka danab ku meel gaadh ahi uu ku dhaco wareegga, SPD waxa ay gashaa gobolka (ama impedance hoose) oo waxa ay ku soo celisaa qulqulka hadda isha ama dhulka. Tani waxay xaddidi doontaa danab ama isku dhejinta ilaa heer badbaado leh. Ka dib wareejinta ku meel gaadhka ah, SPD waxa ay si toos ah dib ugu noqon doontaa xaaladeeda impedance sare.
Waa in la is barbar dhigo aaladaha kala duwan ee la heli karo marka la aqoonsanayo nidaamka qaybinta korontada ee SPD lagu xirayo, 5 arrimood ayaa loo baahan yahay in la tixgeliyo:
Korantada Hawlgelinta Joogtada ah ee ugu badan (MCOV).
Qiimaynta Ilaalinta Korantada (VPR) ama Heerka Ilaalinta Korantada (Sare).
Bixinta Magacaaban ee Qiimaynta Hadda (Gudaha).
Kor u kaca Awooda Hadda ama Qiimaynta Sare ee ugu Sarreysa.
maxaad Qalabka Ilaalinta Qulqulka waa muhiim?
Qalabka ilaalinta qalliinka (SPD) wuxuu ka hortagi karaa xiritaanka mashiinka, hagaajinta nidaamka iyo isku halaynta xogta wuxuuna baabi'in karaa waxyeelada qalabka ee ay sababto ku-meel-gaadhka iyo kororka koronta iyo xadhkaha calaamadaha. Sare u kaca ayaa laga yaabaa in laga dhaliyo dibadda, sida jiilka hillaaca ama jiilka gudaha ee beddelka culeyska korantada. Ilaha kor u kaca gudaha ah (65 boqolkiiba dhammaan ku-meel-gaadhka) waxa ka mid noqon kara culaysyo furan iyo kuwa xidhan, hawl-galka relays-ka ama jebiyeyaasha wareegga, nidaamyada kulaylinta, matoorada, iyo qalabka xafiiska, sida Ray u tixgeliyo.
Qalabka ilaalinta qalliinka (SPD) ayaa lagu dabaqi karaa ku dhawaad ​​xarun kasta oo ku taal warshadaha, ganacsiga, iyo deegaanka, iyo kuwan soo socda ayaa ah qaar ka mid ah codsiyada qalabka ilaalinta qalliinka ee caadiga ah:
Wareegga isgaarsiinta, wareegga signalka alaarmiga, qalabka guriga, qaybinta PLC, sahayda korontada taagan, UPS, la socodka qalabka, culayska muhiimka ah (ka hooseeya 1000 Volts), qalabka caafimaadka iyo qalabka HVAC, iwm
Marka loo eego xeerarka korantada qaranka (NEC) iyo ANSI / UL 1449, SPD waxaa loo cayimay sida soo socota:
Nooca 1: Xidhiidhka Joogtada ah
Waxaa loogu talagalay in lagu rakibo inta u dhaxaysa qaybta sare ee transformerka adeegga iyo dhinaca khadka ee adeegga kala goynta qalabka hadda socda (qalabka adeegga). Ujeeddadooda ugu weyni waa in ay ilaaliyaan heerka dahaarka ee habka korantada si ay uga hortagaan qallafsanaanta dibadda ee ay keento danabka ama beddelka bangiyada korantada ee caadiga ah.
Nooca 2: Xidhiidhka Joogtada ah
Waxaa loogu talagalay in lagu rakibo dhinaca culeyska adeegga ee ka go'ay qalabka hadda jira (qalabka adeegga), oo ay ku jiraan goobta guddiga astaanta. Ujeedada ugu weyni waa inay ka ilaaliyaan qalabka elektarooniga ah ee xasaasiga ah iyo culeysyada ku saleysan microprocessor-ka ee saameynta tamarta hillaaca haraaga, kor u kaca mootooyinka, iyo dhacdooyinka qalliinka gudaha ee kale.
Nooca 3: Xidhiidhka SPD
Isticmaalka barta SPD ee lagu rakibay ugu yaraan dhererka kaari 10 m (30 cagood) laga bilaabo guddiga adeegga korontada ilaa barta isticmaalka. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah isku xirka fiilada, fiilada tooska ah, iyo nooca godka qalabka ilaalinta qalliinka
Xagee laga iibsadaa Qalabka Ilaalinta Qulqulka?
5. Qalabka wareega
* Koronto yar yar oo jebiya
Sidee ayuu Qalabka wareega shaqeeyaan?
Jebiye wareeggu asal ahaan waa fiyuuska dib u dajin. Xubin kasta oo wareeg ah gudaheeda waxaa ku yaal il ku dheggan qayb yar oo alxanka ah (daawaha fusible). Wareeg kasta wuxuu ku xiran yahay silig guriga dhex mara. Haddu waxay ku socotaa guriga iyada oo loo marayo alxanka. Xadhkaha wareeggu ma jabi doono oo alxanka ayaa dhalaali doona marka fiilooyinka ku xiran ay halis ugu jiraan kulaylka. Ilaa inta uu hadda ka boodayo heerka badbaadada, fmuser-net wareegga waa la gooyn karaa si looga fogaado kulaylka, dhalaalka, iyo dabka iman kara. Si ka duwan fiyuuska hal mar kaliya la shaqayn karo oo waa in la beddelaa, jebinta wareegga si toos ah ayaa dib loogu dejin karaa fmuser.-net ama gacanta ka dib marka daawaha la qaboojiyo si uu u bilaabo hawshii caadiga ahayd. Habka wax soo saarka ee wareegyada wareegyada ayaa ka dhigaya iyaga oo si fiican loogu isticmaalo qalabka wareegga ee cabbirrada kala duwan, sida qalabyada guriga keliya ama wareegyada sahayda korontada sare ee magaalooyinka. Jabiyayaasha wareegyada ayaa laga yaabaa inay ka waxtar badnaan karaan furayaasha badbaadada, laakiin maaha furayaasha. Sida Ray uu leeyahay, furaha wareegga iyo furayaasha badbaadada lama beddeli karo. Sidaa darteed, laguma talinayo in loo isticmaalo furayaasha wareegga sida furayaasha.
maxaad Qalabka wareega waa muhiim?
Xakamaynta wareegtadu waa aalad badbaado oo ka hortagta waxyeelada mootada iyo fiilooyinka marka hadda socodka wareega wareega uu dhaafo xadka naqshadeynta. Tan waxaa lagu gaaraa in hadda laga saaro wareegga haddii ay dhacdo xaalad aan ammaan ahayn. Si ka duwan sida dareemaha, jebiyeyaashu si otomaatig ah ayuu u fulinayaa hawlgalkan oo isla markaaba dami korantada, ama bakhtiyaa isla markiiba. Sidan, waxa loo isticmaali karaa sidii qalab adeeg oo toos ah oo lagaga hortagayo dabka iyo shoogga korontada.
Xagee laga iibsadaa Qalabka wareega?
6. Maareeyaha Logic ee Barnaamijyada
*Aalladda Xakamaynta macquulka ah ee barnaamijka
Sidee ayaa Maareeyaha Logic ee Barnaamijyada shaqeeyaan?
Programmable Logic Controller (PLC) waa nooc ka mid ah qalabaynta qalabka elektarooniga ah ee kontoroolka guud ee gobolka, waana xal dabacsan oo awood leh, kaas oo ku habboon ku dhawaad ​​dhammaan codsiyada. PLC Common waxaa ka mid ah CPU, galinta analoogga, wax soo saarka analoogga, iyo wax soo saarka DC fmuser.-net. Codsiga dhabta ah, PLC waxaa loo fahmi karaa nooc ka mid ah kumbuyuutarka dhijitaalka ah. Shaqadiisu waa in la sameeyo go'aamo ku salaysan macquul fmuser.-net ee habka wax soo saarka tooska ah oo dhan, xakamaynta mashiinnada warshadaha, la socoshada agabyada dareemayaasha cadaadiska, dareemayaasha heerkulka, xaddidaadaha, xidhiidhada caawinta, iyo qalabka tijaabada, ka dibna ku xidh iyaga dareemayaasha ku xiran ama qalabka wax gelinta Hesho calaamadda, farsameeyaan xogta, oo kici wax soo saarka iyadoo loo eegayo cabbirrada horay loo qorsheeyay.
Qaybaha guud ee PLC waxaa ka mid ah:
HMI - si loola macaamilo PLC wakhtiga dhabta ah, isticmaalayaashu waxay u baahan yihiin HMI ama mashiinka bini'aadamka. Xidhiidhiyayaashani waxay noqon karaan bandhigyo fudud oo leh akhristayaasha qoraalka iyo kiiboodhka, ama muraayado waaweyn oo taabasho ah oo la mid ah qalabka elektaroonigga ah ee macaamiisha, laakiin si kastaba ha ahaatee, sida Ray uu leeyahay, waxay u oggolaanayaan dadka isticmaala inay arkaan macluumaadka wakhtiga dhabta ah oo ay galiyaan PLC .
Isgaarsiinta - Marka lagu daro agabka wax-gelinta iyo soo-saarka, PLC waxa laga yaabaa inay u baahato in lagu xidho noocyada kale ee nidaamyada. Tusaale ahaan, isticmaaluhu waxa laga yaabaa inuu rabo inuu u dhoofiyo xogta codsiga ee ay diwaan galisay PLC nidaamka la socodka iyo helitaanka xogta (SCADA) kaas oo la socda aaladaha badan ee ku xidhan fmuser-.net. PLC waxay bixisaa dekedo taxane ah iyo borotokoollada isgaarsiinta si loo hubiyo in PLC ay la xiriirto nidaamyadan kale.
Aaladda Barmaamijka – loo isticmaalo in lagu geliyo barnaamijyada xusuusta processor-ka.
Power Supply - Inkasta oo PLC-yada intooda badani ay ku shaqeeyaan 24 VDC ama 220 VAC, qaar ayaa leh sahay koronto oo go'doonsan.
processor - si joogto ah u hubi PLC si aad uga hortagto khaladaadka una qabato hawlaha sida xisaabinta iyo hawlgallada macquulka ah.
Xasuusta -System ROM wuxuu si joogto ah u kaydiyaa xogta go'an ee ay isticmaasho CPU, halka RAM uu kaydiyo macluumaadka qalabka wax gelinta iyo soo saarida, qiimaha saacada, miiska iyo aaladaha kale ee gudaha.
Qaybta I / O - qayb galinta oo daba gal ah aaladaha goobta sida furayaasha iyo dareemayaasha.
Qaybta O / P - Qaybtani waxay bixisaa xakamaynta wax soo saarka ee bambooyin, solenoids, nalalka, iyo matoorada.
maxaad Xakamaynta macquulka ah ee Programmable waa muhiim?
Shan shay oo ay tahay in la fahmo marka la barnaamijka PLC:
Faham sida barnaamijyada iyo I/O scans u shaqeeyaan
Baro sida loola dhaqmo I/O
Fahamka wax ka qabashada xusuusta gudaha
Aqoon u leh hab-waxbarasho (Jaantuska jaranjarada)
Aqoon u leh barnaamijyada barnaamijyada (abuur mashruuc, ku dar caqli gal, ku soo deji maamulaha, la soco onlayn oo wax ka beddel khadka)
Marka loo eego gelinta iyo soo saarista, PLC waxay la socon kartaa oo diiwaan gelin kartaa xogta socodsiinta, sida wax soo saarka ama heerkulka shaqada ee mishiinka, si toos ah ayey u bilaabi kartaa una joojin kartaa hawsha, waxaanay dhalin kartaa digniino marka mishiinku xumaado.
Marka la soo koobo, PLC waa "maskaxda" modular ee habka iswada, kaas oo aad geli karto goobo kala duwan. Way adag yihiin oo waxay u adkeysan karaan xaaladaha adag sida heerkulka sare, qabow, boodhka, iyo qoyaanka xad dhaafka ah .fmuser.-net, laakiin sidoo kale luuqadooda barnaamijka waa sahlan tahay in la fahmo, si fudud ayaa loo habayn karaa. Xaaladda beddelka culeyska, fmuser.-net Relay wuxuu keeni doonaa heerkul sare oo u dhexeeya xiriirada, taas oo ka dhigi doonta xiriiriyeyaasha ku jira gudbinta inay xumaadaan xiritaanka, ugu dambeyntiina waxay horseedi doontaa cilladda qalabka. Ku beddelka gudbinta PLC waxay ka caawisaa ka hortagga kulaylka xad-dhaafka ah ee xiriirada.
Kantaroolaha barnaamijka ayaa noqday habka ugu weyn ee iswada ee warshado iyo codsiyo badan, kuwaas oo bixin kara sax ah, la isku halayn karo, oo sahlan in wax laga beddelo xakamaynta. Marka laga soo tago hawlaha gaarka ah iyo habraaca, Ray waxa kale oo uu ogaadaa in maamuluhu uu qaban karo hawlo adag sida dhaqdhaqaaqa, kaydinta xogta, gelitaanka server-ka shabakadda, iyo e-mailka.
Xagee laga iibsadaa Xakamaynta macquulka ah ee Programmable?
▲Ku noqo Guddiga Xakamaynta Korontada▲ or ▲Ku noqo Content▲
←Qeybtii hore waa Qaybta Kontoroolka Korantada- | Ku laabo
→Qaybta xigta waa Qaybta Isku xirka Cable | Ku laabo
Qaybta durugsan, 9 qalab ayaa ku jira, waana (guji si aad u booqato):
Sanduuqa Isgoyska Korontada
Nalka Degdegga ah
Mitirka qoyaanka dhijitaalka ah
Qalabka ku jira qaybta taageerada durugsan waxaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo xaaladda qolka rack iyo hagaajinta jawiga shaqada ee wanaagsan ee qalabka baahinta ee qolka rack radio fmuser.-net, oo ay ku jiraan bixinta hawo qabow oo qalalan, deminta dabka, iwm.
1. Qalabka Caymiska
Sidee ayuu Qalabka Caymiska shaqeeyaan?
Qolka raadiyaha, qaboojiyaha ayaa ah aalad muhiim u ah qaboojinta. Qalabka idaacadaha qaarkood, sida gudbiyaha raadiyaha FM ee awoodda sare leh, ayaa si lama filaan ah u kululaan doona marka uu socdo muddo dheer. Hawada qabow ee ka timaada qaboojiyaha waxay si fiican u xakameyn kartaa heerkulka qolka oo dhan, qaboojiso qalabka raadiyaha, kana fogaato cilladda mashiinka aan loo baahnayn ee uu keeno heerkulka aadka u sarreeya, ayuu yidhi Ray.
< Qaybta Taakulaynta Agabka
2. Sanduuqa Isgoyska Korontada
Sidee ayuu Sanduuqa Isgoyska Korontada shaqeeyaan?
Sanduuqa isgoysku waa aalad u adeegsata qolof bir ah ama caag ah oo ah halka ay isku xidhmaan wareegga laanta, kaas oo qaadi kara oo si badbaado leh uga ilaalin kara xidhiidhka korantada ee qaab-dhismeedka waxyeelada ay keento qaar ka mid ah jacaylka dabiiciga ah sida walxaha daxalka ama deegaanka. iyo sidoo kale bini'aadantinimada xaasidnimo ah ama faragelin aan ula kac ahayn fmuser.-net. Sanduuqa isgoysyada ayaa sidoo kale ah qayb muhiim ah oo ka mid ah habka gudbinta ee qolka gudbinta ee xarunta raadiyaha, waxaana badanaa loo isticmaalaa qolofyada korantada si loo ilaaliyo xiriirka korontada ee dhismaha. Sida laga soo xigtay raadinta FMUSERRay, waxaa jira laba cabbir: sanduuq saddex-gees ah oo cabbirkiisu yahay 2 inches by 3 inches iyo qoto dheer 2.5 inches, iyo sanduuq leh shan ama in ka badan oo fiilooyinka ah oo cabbirkoodu yahay 2 inches by 3 inches iyo a qoto dheer oo ah 3.5 inches.
3. Nalka Degdegga ah
Sidee ayuu Nalka Degdegga ah shaqeeyaan?
Iftiinka deg-degga ah waxa loola jeedaa aaladda isha iftiinka leh oo leh koronto madax-bannaan oo la bilaabo haddii ay lumiso awoodda dibadda (sida korontada, dabka, iwm.). Xaaladaha aan degdega ahayn, nalka degdega ah ayaa si toos ah u dalaci doona. In kasta oo dhalaalka isha iftiinka degdega ahi uu yahay 19% ilaa 21% ee iftiinka isha iftiinka fmuser.-net, waxay kordhisaa muddada Iftiinka Joogtada ah ee nalka degdegga ah. Iftiinka degdega ah wuxuu caawin karaa shaqaalaha dayactirka inay si badbaado leh uga baxaan xaaladda degdegga ah sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Sidee u shaqeysaa saacada?
Saacaddu guud ahaan waxa ay tixraacaysaa nidaam kasta oo xilliyeedka ah ee loo isticmaalo cabbirka, xaqiijinta, qabashada, iyo muujinta wakhtiga qalabka. Guud ahaan, saacaddu waxay leedahay hal daqiiqo iyo ilbiriqsi. Saacaddu waxay qaadataa daqiiqado sida unugga miisaanka ugu yar waxayna qaadataa 12 saacadood kasta sidii fmuser.-net wareegga wareegga. Saacaddu sidoo kale waa mid ka mid ah qaybaha qalabka lagama maarmaanka ah ee liiska qalabka ee qolka raadiyaha, taas oo ka caawin karta shaqaalaha dayactirka qalabka inay u dejiyaan qalabka si waafaqsan wakhtiga gaarka ah.
5. Kaameeraha Ilaalada
Sidee ayuu Kaameeraha Ilaalada shaqeeyaan?
Kamarada la socodka dhab ahaantii waa qayb ka mid ah kormeerka wareegtada xiran. Raadiyaha raadiyaha, heerka hawlgalka qalabka qolka rack wuxuu u baahan yahay nidaam cad oo wakhtiga dhabta ah ee kormeerka fog. Sidan oo kale, ma fahmi karno oo keliya xaaladda dhabta ah ee hawlgalka qalabka baahinta, laakiin sidoo kale waxaynu fududeyn karnaa fiirsashada xogta iyo ururinta xogta fmuser.-net, laakiin sidoo kale waxaan sameynaa jawaab celin waqtigeeda ah marka qalabka qolka rack uu jebiyo xaalado lama filaan ah. . Shaqaalaha dayactirka ee qolka kombuyuutarku uma baahna inay gadaal iyo gadaal u ordaan marka qalabka qolka raafka uu xumaado, taas oo badbaadisa kharashka shaqada iyo hagaajinta waxtarka shaqada ee qalabka, ayuu yidhi Ray.
Nidaamka kormeerka wareegtada guud wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha soo socda
Diiwaanka Dijital ah
6. Heerkulbeegga Gudaha-Dibadeed
Sidee ayuu Heerkulbeegga Gudaha-Dibadeed shaqeeyaan?
Heerkulbeegga gudaha iyo dibadda waa nooc heerkulbeeg ah oo bixin kara heerkulka gudaha iyo dibadda ee wakhtiga dhabta ah. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad cabbirto heerkulka dibadda adigoon ka bixin meel xaddidan. Dabcan, waxay u baahan tahay qalab dareema fog si loo cabbiro. Marka lagu daro cabbiraadda heerkulka dibadda, waxay sidoo kale cabbiri kartaa heerkulka gudaha, qoyaanka, ama cadaadiska hawada ee bannaanka xaddidan. Heerkulbeegga gudaha iyo dibadda ayaa si gaar ah ugu habboon in lagu isticmaalo xaaladaha cimilada aadka u daran fmuser.-net. Idaacadaha, iibsashada heerkulbeeg gudaha iyo dibadda ah waxay ka caawin kartaa shaqaalaha dayactirka qolka kombayutarka si ay u go'aamiyaan in xaaladaha gudaha ee qolka kombuyuutarku ay ku habboon yihiin hawlgalka qalabka iyo inay sameeyaan hagaajin waqtigeeda sababtoo ah qaar ka mid ah xuduudaha hawada ee aan muuqan (sida. sida qoyaanka hawada iyo heerkulka) aad u sarreeya ama aad u hooseeya, taas oo si toos ah u saameyn doonta hawlgalka qalabka baahinta ee lagu soo iibsaday qiimo sare ama xitaa hagi doona hawlgalka qalabka waxyeellada qaybaha asaasiga ah, ayuu yidhi Ray.
Sidee ayuu Dab-bakhtiiye shaqeeyaan?
Dab-demisku waa nooc ka mid ah qalabka la qaadi karo oo damin kara ololka ka dhasha gubashada walxaha kala duwan ee guban kara iyadoo la daadinayo walxaha aan guban (sida biyaha, kaarboon laba ogsaydh, iwm.) Dab-bakhtiiye caadi ah waa cadaadis cylindrical ah oo gacanta lagu hayo. weel. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad soo saarto giraanta jiidista, qabso fmuser-.net nozzle, oo aad hiigsato waxyaabaha gubanaya si aad dabka u damiso. Qolka idaacadaha, dab-damis ayaa lagama maarmaan u ah. Dab-damiska wakhtiga ku dhaca waxa uu yarayn karaa khasaaraha. Ka dib oo dhan, qofna ma doonayo in uu hal dab ku gubo malaayiinta qalabka baahinta.
Dab-deminta budada qalalan
Dabdemiska Kaarboon Dioxide
Biyaha ceeryaamo Dab-demiska
Kiimikada qoyan ee Dab-demiska
8. Qiiqa dabka
Sidee ayuu Qiiqa dabka shaqeeyaan?
Marwaxada qiiqu waxa loola jeedaa nooc ka mid ah qalabka loo isticmaalo in lagu daayo walxaha waxyeelada leh (sida biyaha xad-dhaafka ah, ur ur xun, qiiq sun ah, iwm.) gudaha hawada gudaha ilaa dibadda iyadoo la soo saarayo. Qolka mishiinada ee xarunta raadiyaha, qalabka qaar ayaa si aan caadi ahayn u shaqayn doona sababtoo ah wasakh badan oo hawada ku jirta, gaar ahaan fmuser.-net qoyaan. Qolka raadiyaha ee xirfadda leh waa inuu lahaadaa jawi aad u qallalan, hawo leh, jawi qabow oo loogu talagalay qalabka baahinta, marawaxada qiiqa ayaa ka ciyaareysa doorkan si ay u siiso qalabka jawi qallalan, hawo leh oo nadiif ah.
▲Ku noqo Qaybta Taakulaynta Agabka▲ or ▲Ku noqo Content▲
←Qeybtii hore waa Qaybta Taakulaynta Agabka- | Ku laabo
→Qaybta xigta waa Qaybta Taageerada kaabta | Ku laabo
Qeybta hoose, 6 qalab ayaa ku jira, waxayna kala yihiin:
RS-232/486 Khadka kantaroolka
Summada Qalabka Shabakadda ee Cable
Qalabka warbaahineed ee kala duwan ayaa wadaaga is-dhexgalyo kala duwan, sidaas darteed fiilooyinka isku xira kala duwan ayaa loo baahan yahay, fmuser.-net, tusaale ahaan, fiilada USB waxay u baahan tahay inay ku xirto interface USB, gudbiyaha raadiyaha wuxuu u baahan yahay inuu isticmaalo khadka kontoroolka RS232/486 si uu ugu xidho fmuser.-net. Siliga isku xidha ayaa ah mid ka mid ah aaladaha caawinta ee durugsan ee aan muuqan. Laakin, la'aanteed fiilooyinkan isku xira, qalabka baahinta qaaliga ah ma bilaabi karaan oo si caadi ah uma shaqeyn karaan, ayuu yiri Ray.
1. Cable-ka Maqalka
Fiilada maqalka ah waxaa loo isticmaalaa si loo hubiyo gelinta iyo soo saarista calaamadda maqalka
Fiilada USB-ga waxa loo adeegsadaa in lagu xidho qalabka u baahan in lagu xidho kombayutarka.
3. RS232/486 Khadka Xakamaynta
Waqtigan xaadirka ah, dhammaan is-gaarsiinta isgaarsiineed ee caadi ahaan loo isticmaalo ogaanshaha fog iyo xakamaynta qolka raadiyaha.
4. Korontada Plug-in
Furaha korantada waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro qalabka korontada.
5. Shabakadda Shabakadda
Xadhkaha shabakada waxaa loo isticmaalaa in lagu xidho qalabka u baahan in lagu xidho shabakada
▲Ku noqo Qaybta Isku xirka Cable▲ or ▲Ku noqo Content▲
←Qeybtii hore waa Qaybta Isku xirka Cable- | Ku laabo
Qaybta taakulaynta kaydinta, 6 qalab ayaa lagu daray, waxayna kala yihiin:
Sanduuqa Qalabka Dayactirka
Buugga Duubista Hawlgalka
Ka hor inta aan shaqaalaha dayactirka dayactirin qalabka qolka baahinta, waxay inta badan u baahan yihiin qalab dayactir ah, sida jaranjarada aluminium aluminium, qalabka dayactirka, qaybaha beddelka, iwm fmuser.-net. Ka dib markii shaqaalaha dayactirku dhamaystiraan dayactirka qalabka qolka baahinta, waxay u baahan yihiin inay duubaan xogta qalabka. Waqtigaan, waxay u baahan yihiin inay isticmaalaan buug-yaraha sida buug-gacmeedka diiwaanka dayactirka, kaas oo diiwaangelin kara xaaladda dhabta ah ee wakhtiga dhabta ah. qalabka baahintaayuu yidhi Ray. Si loo tijaabiyo heerka hawlgalka qalabka baahinta, waxay u baahan yihiin inay adeegsadaan qalabka baahinta baahinta sida raadiyaha. Liiska qalabka soo socda ayaa ku siin kara tixraac, haddii aad u baahan tahay hagitaan xirfadeed oo dheeraad ah, fadlan la xidhiidh FMUSER!
1. Qalabka Qalabka
Calaamadda qalabka waxaa loo isticmaalaa in lagu calaamadiyo qalabka loogu talagalay duubista xogta.
2. Salaanka Gudaha
Marka shaqaalaha dayactirka qolka mishiinku u baahan yihiin aragti dayactir oo ballaadhan ama aanay gaadhi karin qayb ka mid ah mishiinka dheer, waxay isticmaali karaan jaranjarada.
3. Qalabka Dayactirka (Screwdriver, Wrench, Universal Watch, iwm.)
Shaqaale kasta oo dayactir ah wuxuu u baahan yahay inuu sido qalab dhamaystiran oo ah qalabka qolka mashiinka. Marka mishiinku leeyahay cillado lama filaan ah, qalabka dayactirka ee qalabka ayaa si wax ku ool ah u caawin kara shaqaalaha dayactirka si ay u hagaajiyaan mashiinka.
4. Buugga Diiwaangelinta Qalabka
Waxaa loo isticmaalaa in lagu qoro xaaladda shaqada ee mashiinka ka hor iyo ka dib dayactirka waxay ka caawin kartaa shaqaalaha dayactirka inay si dhakhso ah u go'aamiyaan in mashiinku si caadi ah u shaqeynayo iyo haddii cabbirrada shaqada loo baahan yahay in la hagaajiyo. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale wanaajin kartaa heerka dulqaadka qaladka marka mishiinka dib loo hagaajiyo mustaqbalka.
5. Diiwaanka Waajibaadka
Waxaa loo isticmaalaa in lagu qoro qofka mas'uulka ka ah dayactirka qalabka, kaas oo ku habboon raadinta mas'uuliyadda.
6. Qaybaha kaydka ah ee Beddelka Qalabka
Qalabka baahintu waa qalab aad u sax ah, kaas oo ay ku jiraan qaybo badan oo lagama maarmaan ah oo cabbirro kala duwan leh. Marka qalabku xumaado, waxaa lagama maarmaan ah in si degdeg ah loo helo qaybo ka mid ah beddelka qaybaha dhaawacan, si loo hubiyo hawlgalka qalabka.
7. Qaadaha Raadiyaha
Qalab loo isticmaalo in laga helo calaamadaha raadiyaha ee xarun raadiyaha oo loogu beddelo barnaamijyada raadiyaha
▲Ku noqo Qaybta Taageerada kaabta▲ or ▲Ku noqo Content▲
Waxaan nahay Khabiirka Dhismaha Xaruntaada Raadiyaha
Liiskan qalabka baahinta lagama maarmaanka u ah idaacadaha caadiga ah ayaa ah kan ugu faahfaahsan, inkasta oo aanu ahayn kan ugu dhammaystiran. Idaacad kasta, gudbiyaha raadiyaha, anteenada gudbinta, iyo qalabka kale ee baahinta xirfadleyda ayaa go'aamiya tayada barnaamijka ee idaacadda. Qalabka qolka baahinta ee aadka u wanagsan waxa uu idaacadahaaga siin karaa talo iyo wax soo saar tayo sare leh si baahintaada iyo dhagaystayaashaada barnaamijku ay si dhab ah isugu xidhan yihiin. FMUSER, hubinta waayo-aragnimada wanaagsan ee dhagaystayaasha raadiyaha sidoo kale waa mid ka mid ah himiladeena. Waxaan haysanaa xalka ugu dhameystiran ee furaha raadiyaha iyo tobanaan sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan wax soo saarka iyo soo saarista qalabka raadiyaha. Waxaan ku siin karnaa la-talin-xirfadeed iyo taageero farsamo oo khadka tooska ah si aad u dhisto idaacad la shaqsiyeeyay oo tayadeedu sarreyso. NALA SOO XIRIIR oo aan kaa caawinno dhisidda riyadaada raadiyaha!
Wadaaggu waa Daryeel!
▲Ku laabo nuxurka▲
"Qoraalkan waxaa markii ugu horreysay tafatiray Ray Chan, oo ah mid ka mid ah shaqaalaha sare ee Fmuser iyo khabiir ku takhasusay raadinta raadinta Google. Waxa uu u heellan yahay in uu abuuro akhrin cad, oo aan buuq lahayn oo loogu talagalay hiwaayadda raadiyaha iyo macaamiisha xirfadleyda ah ee u baahan qalabka idaacadda. Marka aanu wax qorin ama wax baadhin, waxa uu jecel yahay ciyaarta kubbadda kolayga iyo akhriska buugaagta”.